ကွားသိရသမြှ Archives - Shwe Khit
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ သမ်မတတို့ကို ပြျောတျောဆကျရသော မိနျးမလှလေးမြားအဖှဲ့
January 25, 2022 by Zaw Hein
အှနျလိုငျးပျေါမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ မွောကျကိုးရီးယားနိုငျငံက ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှလေးတှေ
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ သမ်မတတို့ကို ပြျောတျောဆကျရသော မိနျးမလှလေးမြားအဖှဲ့ (Pleasure Squad)
ထိုအဖှဲ့အား ကိုရီးယား ဘာသာလို ဂိပှနျးဂြို ‘Gippeumjo’ ဟုချေါသညျ။
ထိုအဖှဲ့အစညျးအကွောငျးကို ကမ်ဘာသို့ စတငျ အသိပေးပွောကွားသူမှာ ဂပြနျလူမြိုး Kenji Fujimoto ( 藤本 健二 ) ဖွဈသညျ။
ဂပြနျလူမြိုး Kenji Fujimoto သညျ ၁၉၈၈ ခုနှဈ မှ ၂၀၀၁ ခုနှဈ အထိ သမ်မတ ကငျမျဂြောငျအီးလျ ( Kim Jong-il) အား ဂပြနျအစားအစာ (Sushi ) ပွုလုပျပေးရသော စားဖိုမှူးတယောကျ ဖွဈသညျ။
ထိုအဖှဲ့အစညျး အကွောငျးကို ဒုတိယပွောပွသူမှာ ၂၀၁၀ ခုနှဈတှငျ တောငျကိုရီးယားသို့ ထှကျပွေးလှတျမွောကျခဲ့သော မွောကျကိုရီးယား အမြိုးသမီးတဦး ဖွဈသညျ။
သူမသညျ သူမ၏ အတှအေ့ကွုံကို Marie Claire မဂ်ဂဇငျးတိုကျအား ဖှငျ့ဟ ပွောကွားခဲ့သညျ။
ထို၂၀၁၀ မှ ယနအေ့ထိ မွောကျကိုရီးယားမှ ထှကျပွေး လှတျမွောကျခဲ့သူမြားက ဖွညျ့စှကျ၍ “ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှလေးမြားအဖှဲ့” အကွောငျးကို တောငျကိုရီးယား TV interview တို့တှငျ အသေးစိတျ ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။
ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့တှငျ မိနျးမလှပေါငျး ၂၀၀၀ ကြျော ပါဝငျသညျ။ ထိုမိနျးမလှတို့သညျ အဓိကအားဖွငျ့ သမ်မတကို ဖြျောဖွရေနျ ဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ၏ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့အစညျး (Worker’s Party of Korea) ရှိ ရာထူးကွီးသူမြားကိုလညျး ဖြျောဖွရေသညျ။
၁၉၇၈ ခုနှဈ ကငျမျဂြောငျအီးလျ ( Kim Jong-il l) က ဖခငျ ကငျမျအီးလျဆောငျး ( Kim il Song ) အား စိတျပြျောရှငျစရေနျ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့ စတငျ ဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။
ထိုမိနျးကလေးမြားသညျ မွောကျကိုရီးယား၏ အလှဆုံး မိနျးကလေးမြား ဖွဈကွသညျ။
သမ်မတ ၃ ဦး၏ အကွိုကျပျေါမူတညျ၍ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြား အဖှဲ့၏ အဖှဲ့ဝငျဖွဈရနျ စညျးမဉျြး စညျးကမျးတို့သညျ အပွောငျးအလဲ ရှိလသေညျ။
* အရပျ ၁၆၀ စငျတီမီတာ ကြျောကြျော ဖွဈနရေမညျ။ (၁၇၀ စငျတီမီတာအောကျ)
* အသကျ ၁၆ နှဈမှ ၁၇နှဈ ကွားဖွဈရမညျ။
ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားရှေးခယျြရေးအဖှဲ့သညျ အလယျတနျးကြောငျးမြားသို့ လာရောကျ၍ မိနျးကလေးမြားကို ရှေးခယျြကွသညျ။
ထိုသူတို့သညျ မိနျးမလှလေးမြား လှတျသှားမညျစိုး၍ တယောကျခငျြး သသေခြောခြာ စီစဈသညျ။ အရှေးခယျြခံရသော မိနျးကလေးမြားသညျ ငွငျးဆနျပိုငျခှငျ့ မရှိပါ။
တခါတရံ သမ်မတကိုယျတိုငျ လာ၍ စငျတျောကောကျသညျ။
(လကျရှိ) သမ်မတ ကငျမျဂြောငျအှနျး (Kim Jong-un)၂၀၁၁ ခုနှဈတှငျ ဖခငျဖွဈသူ၏ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြား အဖှဲ့ကို ဖကျြသိမျးခဲ့သညျ၊
၂၀၁၅ ခုနှဈ ဧပွီလတှငျ သမ်မတ ကငျမျဂြောငျအှနျး အတှကျ” ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြား အဖှဲ့အသဈ” ကို ထပျမံဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။
သမ်မတ ကငျမျဂြောငျအှနျး နှဈသကျသညျ့ပုံစံကတော့
* မကျြနှာသှယျသှယျ နှငျ့ ခဈြစရာကောငျးသော မိနျးကလေးမြား ဖွဈရမညျ။
* အသကျ ၁၆ နှဈမှ ၁၇နှဈကွား ဖွဈရမညျ။
လကျရှိ သမ်မတကငျဂြောငျအှနျးသညျ သူ၏ မိနျးမ လီ ဆိုးလျ ဂြူ ( Ri Sol-ju ) အား ထိုအဖှဲ့ထဲမှ ကောကျယူလကျထပျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျဟု ပွောကွသညျ။
မိနျးကလေးတို့သညျ သူမကိုယျသူမ အလှဆုံးဟု ထငျသော အမူအရာကို လုပျပွရသညျ။
သူမ၏ အတျောဆုံး ဖြျောဖွရေေး တခုကို သရုပျဆောငျပွရသညျ။ သီခငျြး၊ အက၊ အတီးအမှုတျ စသညျ
မြိုးရိုးကောငျးရမညျ။ မြိုးရိုးထဲတှငျ ထောငျကသြူ မရှိစရေ။ မြိုးရိုးထဲ၌ မွောကျကိုရီးယားမှ ထှကျပွေးသောသူ တယောကျ ရှိပါက ခကျြခငျြး အပယျခံရသညျ။
ခွဆေုံး ခေါငျးဆုံး အမာရှတျတခု ရှိလြှငျ အပယျခံရသညျ။
ကူးစကျရောဂါရှိ မရှိ ၊ ကနျြးမာရေးကောငျးမကောငျး အကုနျ အစဈခံရမညျ ဖွဈသညျ။
တတိယအဆငျ့ အောငျမွငျသှားသောမိနျးကလေးသညျ ဘာဆကျလုပျရမညျနညျး…?
အလယျတနျးကြောငျး ပွီးဆုံးပါက မွောကျကိုရီးယား သမ်မတနိုငျငံ မွို့တျော ပွုံယမျးသို့ အပို့ခံရသညျ။ ထိုအခြိနျမှစ၍ အသကျ ၂၇ နှဈ ပွညျ့သညျအထိ မိဘ ဆှမြေိုးမြားနှငျ့ ဆကျသှယျခှငျ့ မရတော့ပေ။
သူတို့နှငျ့ ပတျသကျသော စာအုပျမြား ဖတျနိုငျသလောကျ မြားမြား ဖတျရသညျ။ စာစီစာကုံးမြား ရေးရသညျ။ ကြေးဇူးတငျကွောငျး စာလှာမြားစှာကိုလဲ အပွိုငျအဆိုငျ ရေးရသညျ။
ထိုအဆငျ့ အောငျမွငျမှ တကယျ့သငျတနျးမြားကို တကျခှငျ့ရသညျ။
* လိငျဖြျောဖွမှေုပိုငျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြမှု သငျတနျး
* အနှိပျ ကြှမျးကငျြမှု သငျတနျး
* ဧညျ့သညျ (နိုငျငံခွားသားမြား) မြားကို ဧညျ့ခံခွငျး ကြှမျးကငျြမှု သငျတနျး
* အဖြျောယမကာ တိုကျကြှေးခွငျး ကြှမျးကငျြမှု သငျတနျး
ထိုသငျတနျးမြား သငျကွားလကေ့ငျြ့ပွီးသောအခါ ကြှမျးကငျြသညျ့ အရညျအခငျြးမြားကို လိုကျ၍ ထိုမိနျးမလှလေးမြားကို အဓိကအားဖွငျ့ အုပျစု ၃ ခု ခှဲခလြိုကျသညျ။
1. လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကနြေပျမှုပေးသညျ့အဖှဲ့ – Manjokjo (만족조)
2. မာဆတျချြ အနှိပျအဖှဲ့ -Haengbokjo (h행복조) –
3. သီခငျြးဆို/ အကအဖှဲ့ (တခါတရံ တကိုယျလုံး ခြှတျ၍ ကပွရသညျ။) Gamujo (가무조)
သမ်မတက သဘောကြ၍ သူ့အတှကျ လိငျမှုကိစ်စ ဖြျောဖွရေနျ အရှေးခယျြခံရသော မိနျးကလေးမြား ဆိုလြှငျတော့ ထိုမိနျးကလေးမြားသညျ ထိုသမ်မတ၏ သီးသနျ့အကွိုကျ တို့ကို သိရှိရနျ အထူးသငျတနျး တကျကွရသညျ။
တခြို့ မိနျးမလှလေးမြားအား နိုငျငံခွား ပညာတျောသငျ လှတျသညျ။ နိုငျငံခွားမှ သငျယူလာသော နညျးလမျးအသဈမြားနှငျ့ သမ်မတကို စိတျပြျောအောငျ ပွုစုတတျစရေနျ ဖွဈသညျ။
အသကျ ၂၇ နှဈရောကျလြှငျ အသကျကွီးသှား၍ သမ်မတက အလိုမရှိတော့။ ထိုမိနျးကလေးတို့သညျ စဈတပျတာဝနျ ထမျးဆောငျရတော့သညျ။ ထိုအခါမှ မိဘဆှမြေိုးတို့ဖွငျ့ ဆကျသှယျခှငျ့ရသညျ။
ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့မှကူးပွောငျးလာသော စဈမှုထမျး မိနျးမမြားသညျ တခါတညျးနှငျ့ ရာထူးကောငျးကောငျး အမွှောကျစားခံရသညျ။
သာမာနျ စဈအမှုထမျး မိနျးမမြားသညျ မညျသို့ဘဲ ကွိုးစားပါစေ ရာထူးကွီးကွီးရရနျ မလှယျပေ။
အသကျ ၂၇ နှဈ မပွညျ့ခငျ ( ဥပမာ မှတျဉာဏျမကောငျး၊ ထိခိုကျဒါဏျရာကွောငျ့ အမာရှတျတခု ရရှိ၊ စသညျ) အကွောငျးတခုခုကွောငျ့ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့မှ အပယျခံရသူမြားသညျလညျး မိဘဆှမြေိုးမြားထံ ပွနျခှငျ့မရှိပေ။
ထိုမိနျးကလေးမြားသညျ အသကျ ၂၇ ပွညျ့သညျအထိ သတျမှတျထားသောအဆောငျ၌သာ နရေသညျ။
ထိုမိနျးကလေးမြားအား သမ်မတလကျအောကျရှိ ပထမတနျးစား အုပျခြုပျရေးပိုငျး ယောကျြားသားမြား ဓာတျပုံပွ၍ သူမကွိုကျသောယောကျြားကို ရှေးခယျြစသေညျ။ ထိုသူနှငျ့ တှဆေုံ့ပွီး သူမက သဘောကလြှငျ လကျထပျခှငျ့ရှိသညျ။
ထူးဆနျးသညျမှာ ထိုမိနျးကလေးမြားက ယောကျြားမြားကို ရှေးခယျြရခွငျး ဖွဈသညျ။ ယောကျြားမြားက ရှေးခယျြခှငျ့ မရှိပေ။
ထိုမိနျးကလေးမြားက သူမ လကျထပျခငျြသညျ့ ယောကျြားမတှလြေှ့ငျ သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့၏ အကူ အလုပျသမမြားအဖွဈ အသကျ၂၇ နှဈ ပွညျ့သညျအထိ နထေိုငျရမညျ ဖွဈသညျ။
၂၇ နှဈ ပွညျ့လြှငျ အခွား မိနျးမလှလေးမြား နညျးတူ စဈတပျ၌ တာဝနျထမျးဆောငျရသညျ။ ထိုအခါမှ သူမြားနညျးတူ မိဘဆှမြေိုးတို့ဖွငျ့ ဆကျသှယျခှငျ့ရသညျ။
သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့မှ ထိုမိနျးမလှလေးမြားသညျ မညျသို့သော အကြိုးကြေးဇူးမြားကိုခံစားရသနညျး…?
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံတှငျ မိနျးကလေး တယောကျသညျ သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့သို့ အရှေးခယျြခံရလြှငျ အလှနျ ဝမျးမွောကျ ဂုဏျယူကွသညျ။
အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော သူမသညျ နိုငျငံ၏ အလှဆုံးသော မငျးသမီးမြားဟု အသိအမှတျ ပွုခံရသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ထိုမိနျးမလှလေးမြား၏ အနာဂတျသညျ တောကျပနသေညျ။ သူမဘဝ တသကျတာ ဆငျးရဲခွငျးမှ လှတျကငျးပွီ ဖွဈသညျ။
ထိုမိနျးမလှလေးမြား အားလုံးသညျ နိုငျငံတျောမှပေးသော လစာကောငျးကောငျး ( ၄,၇၀၀,၀၀၀ ဝမျ ) ရကွသညျ့အပွငျ သမ်မတတို့က သဘောကလြှငျ အပိုဆုငှမြေားလညျး ရကွသညျ။
လကျရှိ သမ်မတ ကငျဂြောငျအှနျးဆိုလြှငျ သူခဈြသော မိနျးကလေးတခြို့အား အထူး နံပါတျတပျထားသော မာစီးဒီးဈကား( Mercedes Benz ) မြားကို ပေးသညျဟု ဆိုသညျ။ နိုငျငံခွားသို့ အပြျောခရီး ထှကျခှငျ့လညျး ပေးသေးသညျ။
အသကျ ၂၇ နှဈ ကြျောသှားသဖွငျ့ စဈတပျတာဝနျ ထမျးဆောငျရသောမိနျးကလေးတို့သညျ အတိတျက သမ်မတသညျ သူမအပျေါ ဘယျအထိ အရေးပေးခဲ့သညျ ဘယျအဆငျ့အထိခဈြတငျး နှီးနှောခဲ့သညျကို မူတညျ၍ ရာထူး အနိမျ့ အမွငျ့ ရကွသညျ။
အထူးသဖွငျ့ သမ်မတနှငျ့အတူ အိပျစကျဖူးပါက အထူးအခှငျ့အရေးမြား အမြားဆုံး ရကွသညျ။
အသကျ ၂၇ ကြျောသှားသျောလညျး သမ်မတက အနားမှာ ရှိစခေငျြသော မိနျးမလှမြားကတော့ စဈတပျထဲ မဝငျရပါ။
သမ်မတအနီး နရေသော အခကျြ အပွုတျ အိမျအလုပျ စသညျ့ အလုပျတာဝနျတခုခုကို အပေးခံရတတျသညျ။
သမ်မတ ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြားအဖှဲ့ မှ ထိုမိနျးမလှလေးမြားအား မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံတှငျ မညျသူကမြှ အထငျသေး ရှုံ့ခခြွငျး မပွုရဲကွပါ။
ထိုမိနျးမလှလေးမြားသညျ တနညျးအားဖွငျ့ တိုငျးပွညျတှငျ ဩဇာအာဏာ ရှိသူမြားလညျးဖွဈသညျ။
ထိုမိနျးမလှလေးမြား အသကျ ၂၇ ကြျော၍ သာမာနျ လူတနျးစား အသိုငျးအဝိုငျးသို့ ကငျြလညျသညျ့အခါ လကျထပျခငျြသူ မြားပွား၍ တလေးတစား အရေးပေးခွငျး ခံရသူမြားလညျး ဖွဈပါသညျ။
ထိုမိနျးမလှလေးမြား နမေကောငျးဖွဈလြှငျ အုပျခြုပျရေး လူတနျးစားမြားသာ တကျရောကျ ဆေးကုသခှငျ့ရသော အထူးဆေးရုံတှငျ အခမဲ့ ဆေးကုသခှငျ့ ရကွသညျ။
သမ်မတနှငျ့ အထကျလူကွီးမြားနှငျ့ ရငျးနှီးသော ထိုမိနျးမလှလေးတခြို့သညျ မာနကွီး၍ မောကျမာကွသညျဟုလညျး ဆို၏။
ပွညျသူတို့သညျ ထိုမိနျးမလှလေးမြား အသကျကွီး၍ အဖှားကွီးဖွဈနပေါစေ မလေးမခနျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈအောငျ မလုပျရဲကွပေ။
ထူးဆနျးတာ နောကျတခု ရှိသေးသညျ။
ထိုမိနျးကလေးတို့သညျ သမ်မတလကျအောကျတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနသေော အထကျအရာရှိမြား မကနျြးမမာဖွဈလြှငျ အလုပျအကြှေး ပွုကွရသညျ။ လိုအပျလြှငျ လိငျမှုကိစ်စပိုငျးဆိုငျရာ ပွုစုခွငျးမြားလညျးပွုလုပျပေးရသညျဟု ဆိုသညျ။
ထိုမိနျးမခြောမြားသညျ မညျသို့သော အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ခံစားရသနညျး?
ထိုအမြိုးသမီးတို့၏ လစာကောငျးကောငျး ရသညျ့အပွငျ သားသမီးတို့သညျ မွောကျကိုရီးယားရှိ အဆငျ့မွငျ့တက်ကသိုလျသို့ စာမေးပှဲမဖွပေဲ အစိုးရ ထောကျပံ့ကွေးဖွငျ့ တကျခှငျ့ရလသေညျ။
မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ၏ သမ်မတပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှမြား အဖှဲ့တှငျ အလှနျလှပသော နိုငျငံခွားသူမြား ( မြားသောအားဖွငျ့ ရုရှားအမြိုးသမီးမြား) လညျး ပါဝငျသညျဟု ဆိုကွသညျ။
ထိုမိနျးမလှလေးမြားသညျ အလယျတနျး ကြောငျးသူဘဝမှာပငျ သူမတို့၏ ဘဝရညျမှနျးခကျြမှာ ပြျောတျောဆကျ အလှပွ ဖြျောဖွရေေးမယျတဈယောကျ ဖွဈရနျ မြှျောလငျ့ကွပမေညျ။
ဖြျောဖွရေေးမယျအဖွဈ အရှေးခယျြခံရခွငျးသညျပငျ သူမတို့အတှကျ အောငျမွငျမှုနှငျ့ ဂုဏျတကျစရာ ဖွဈနသေညျ။
ဤသို့ဖွဈရသညျမှာ ထိုတိုငျးပွညျ၏ အာဏာရှငျတို့ ဖနျတီးထားသော စနဈဆိုးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ထိုမိနျးကလေးတို့တှငျ ငွငျးဆနျပိုငျခှငျ့ မရှိ။ ရှေးခယျြပိုငျခှငျ့ မရှိ။
ထိုမိနျးကလေးတို့၏စိတျတှငျ သူမတို့သညျ သှေး၊ ခြှေး၊ ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ တဘဝလုံးကို ပေးဆပျထားသော တာဝနျကပြှေနျအောငျ ထမျးဆောငျနသေော. ထူးခြှနျပွောငျမွောကျကွသော သူမြားဟု မိမိကိုယျကို မိမိ ခံယူထားကွလသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ သူတို့သညျ မောကျမာကွသညျ။ ဘဝငျ မွငျ့ကွလသေညျ။
စဈအာဏာရှငျ အစိုးရသညျ တိုငျးသူပွညျသား အားလုံး ကို ခွောကျလှနျ့ခွငျးနှငျ့ အကွောကျတရားအောကျတှငျ ဟနျခကျြညီအောငျ အစီအစဉျတကြ ထိနျးသိမျးထားသညျ။
ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှလေးမြားအဖှဲ့သညျ အထငျရှားဆုံး ဥပမာဖွဈသညျ။ ထိုအဖှဲ့သညျ လောကနိယာမနှငျ့ မညျမြှပငျ ကှာဟနပေါစေ မွောကျကိုရီးယား နိုငျငံတှငျမူအထှတျအထိပျ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားဖှယျဖွဈနသေညျ။
ပြျောတျောဆကျ မိနျးမလှလေးတို့သညျ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံအပွငျမှ တကယျ့ လူ့အခှငျ့အရေး တကယျ့ အမှနျတရားကို သိခငျြကွမညျထငျပါသလား?
အကယျ၍ သူမတို့ အမှနျတရားကို သိလာခဲ့လြှငျ သူတို့ တဘဝလုံး ကွိုးစား ထူးခြှနျ ဂုဏျတကျခဲ့သမြှ အရာအားလုံး သဲထဲရသှေနျ ဖွဈကုနျတော့မညျ ဖွဈသညျ။
သူမတို့အတှကျတော့ ပွောငျးလဲခွငျးသညျ ကွောကျစရာ အကောငျးဆုံးဖွဈနပေမေညျ။ သူမတို့ ဘဝသညျသာ အကောငျးဆုံးဟု ထငျနကွေပမေညျ။
ဖြျောဖွရေေးမယျ မိနျးမလှလေးမြား၏ မိဘမြားသညျ သူတို့ သမီးမြား၏ ဘဝကို တကယျပငျ ကနြေပျဝမျးမွောကျ ဂုဏျယူနကွေပါသလား?
ထိုမိနျးကလေးမြားနှငျ့ လကျထပျကွသော ယောကျြားမြား၏ ခံစားခကျြသညျ မညျသို့ ရှိမညျနညျး?
အကွောကျတရား၏ အောကျတှငျ ရှိသော အဖွသေညျ သံသယဝငျဖှယျရာ အတိပငျ။
အာဏာရှငျ သမ်မတတို့သညျ သူတို့လိုခငျြတာ မှနျသမြှကို ခွောကျလှနျ့ခွငျးဖွငျ့ ရယူထားသညျ။ ပွညျသူတို့ သှေးခြှေးမြားနှငျ့ ရငျးထားသညျ့ ပွညျသူ့ ဘဏ်ဍာ အခှနျအတုတျတို့နှငျ့ စညျးစိမျကို အပွညျ့အဝ ခံစားနသေညျ။
တိုငျးပွညျအုပျခြုပျ မငျးလုပျသူသညျ တိုငျးပွညျ၏ ဖခငျ ဖွဈသညျ။ ပွညျသူမြားသညျ သားသမီးမြားဖွဈသညျ။ ယခု ပွညျသူတှမှော ဆငျးရဲငတျပွတျ၊ အစာရစောမရှိ၊ ရောဂါမြား ထူပွောကာ လမျးမမြားပျေါ၌ အေးခဲ သဆေုံးနကွေသဖွငျ့ ပွညျသူကို လူလို့ပငျ သတျမှတျပုံ မရတော့ပါ။
သူတို့သညျ တိုငျးပွညျ၏ သမီးပြိုမြားကို လကျပါးစေ ငှဝေယျကြှနျမြားလို လိငျကြှနျမြားလို ဆကျဆံ၍ အသုံးတျောခံနသေညျ့ အာဏာရ မုဒိမျးကောငျကွီးမြားသာ ဖွဈပါသညျ။
ထိုကဲ့သို့ အာဏာရှငျတို့၏ စနဈဆိုးကွီးမြား ကဆြုံးမှသာလြှငျ ကြှနျမတို့ ကမ်ဘာကွီးသညျလညျး အမှနျတကယျ ငွိမျးအေးနိုငျပါလိမျ့မညျ။
Source: မရှမေိုး – ကိုရီးယား
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံက ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးတွေ
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတတို့ကို ပျော်တော်ဆက်ရသော မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့ (Pleasure Squad)
ထိုအဖွဲ့အား ကိုရီးယား ဘာသာလို ဂိပွန်းဂျို ‘Gippeumjo’ ဟုခေါ်သည်။
ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ကမ္ဘာသို့ စတင် အသိပေးပြောကြားသူမှာ ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto ( 藤本 健二 ) ဖြစ်သည်။
ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ် အထိ သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ် ( Kim Jong-il) အား ဂျပန်အစားအစာ (Sushi ) ပြုလုပ်ပေးရသော စားဖိုမှူးတယောက် ဖြစ်သည်။
ထိုအဖွဲ့အစည်း အကြောင်းကို ဒုတိယပြောပြသူမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယားသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သော မြောက်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်သည်။
သူမသည် သူမ၏ အတွေ့အကြုံကို Marie Claire မဂ္ဂဇင်းတိုက်အား ဖွင့်ဟ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို၂၀၁၀ မှ ယနေ့အထိ မြောက်ကိုရီးယားမှ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့သူများက ဖြည့်စွက်၍ “ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့” အကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယား TV interview တို့တွင် အသေးစိတ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့တွင် မိန်းမလှပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် ပါဝင်သည်။ ထိုမိန်းမလှတို့သည် အဓိကအားဖြင့် သမ္မတကို ဖျော်ဖြေရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (Worker’s Party of Korea) ရှိ ရာထူးကြီးသူများကိုလည်း ဖျော်ဖြေရသည်။
၁၉၇၈ ခုနှစ် ကင်မ်ဂျောင်အီးလ် ( Kim Jong-il l) က ဖခင် ကင်မ်အီးလ်ဆောင်း ( Kim il Song ) အား စိတ်ပျော်ရွှင်စေရန် ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထိုမိန်းကလေးများသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ အလှဆုံး မိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။
သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ်သည် သူ့အဖေအကြိုက် မိန်းမလှလေးများကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။
သမ္မတ ၃ ဦး၏ အကြိုက်ပေါ်မူတည်၍ ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတို့သည် အပြောင်းအလဲ ရှိလေသည်။
* မျက်နှာဖောင်းဖောင်းနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများကိုရွေးချယ်သည်။
* အရပ် ၁၆၀ စင်တီမီတာ ကျော်ကျော် ဖြစ်နေရမည်။ (၁၇၀ စင်တီမီတာအောက်)
* ပိန်၍ ကိုယ်လုံးလှရမည်။
* အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၇နှစ် ကြားဖြစ်ရမည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် အလယ်တန်းကျောင်းများသို့ လာရောက်၍ မိန်းကလေးများကို ရွေးချယ်ကြသည်။
ထိုသူတို့သည် မိန်းမလှလေးများ လွတ်သွားမည်စိုး၍ တယောက်ချင်း သေသေချာချာ စီစစ်သည်။ အရွေးချယ်ခံရသော မိန်းကလေးများသည် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။
တခါတရံ သမ္မတကိုယ်တိုင် လာ၍ စင်တော်ကောက်သည်။
(လက်ရှိ) သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း (Kim Jong-un)၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်၊
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း အတွက်” ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့အသစ်” ကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း နှစ်သက်သည့်ပုံစံကတော့
* မျက်နှာသွယ်သွယ် နှင့် ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများ ဖြစ်ရမည်။
* အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၇နှစ်ကြား ဖြစ်ရမည်။
( သို့သော် အသက် ၁၃ နှစ် မိန်းကလေး တယောက်အား ရွေးထားသည်။ )
လက်ရှိ သမ္မတကင်ဂျောင်အွန်းသည် သူ၏ မိန်းမ လီ ဆိုးလ် ဂျူ ( Ri Sol-ju ) အား ထိုအဖွဲ့ထဲမှ ကောက်ယူလက်ထပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြသည်။
အရွေးခံရသော မိန်းကလေးတို့သည် စာမေးပွဲ ၃ ဆင့် အစစ်ခံရသည်။
မိန်းကလေးတို့သည် သူမကိုယ်သူမ အလှဆုံးဟု ထင်သော အမူအရာကို လုပ်ပြရသည်။
သူမ၏ အတော်ဆုံး ဖျော်ဖြေရေး တခုကို သရုပ်ဆောင်ပြရသည်။ သီချင်း၊ အက၊ အတီးအမှုတ် စသည်
မျိုးရိုးကောင်းရမည်။ မျိုးရိုးထဲတွင် ထောင်ကျသူ မရှိစေရ။ မျိုးရိုးထဲ၌ မြောက်ကိုရီးယားမှ ထွက်ပြေးသောသူ တယောက် ရှိပါက ချက်ချင်း အပယ်ခံရသည်။
ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး အမာရွတ်တခု ရှိလျှင် အပယ်ခံရသည်။
ကူးစက်ရောဂါရှိ မရှိ ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်း အကုန် အစစ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။
တတိယအဆင့် အောင်မြင်သွားသောမိန်းကလေးသည် ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း…?
အလယ်တန်းကျောင်း ပြီးဆုံးပါက မြောက်ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ မြို့တော် ပြုံယမ်းသို့ အပို့ခံရသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အသက် ၂၇ နှစ် ပြည့်သည်အထိ မိဘ ဆွေမျိုးများနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့် မရတော့ပေ။
ပထမဦးစွာ ထိုမိန်းကလေးတို့သည် သမ္မတ ၃ ဦး သမိုင်းကို အသေးစိတ် မှတ်သား ကျက်မှတ်ရလေသည်။
သူတို့နှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်များ ဖတ်နိုင်သလောက် များများ ဖတ်ရသည်။ စာစီစာကုံးများ ရေးရသည်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာလွှာများစွာကိုလဲ အပြိုင်အဆိုင် ရေးရသည်။
ထိုအဆင့် အောင်မြင်မှ တကယ့်သင်တန်းများကို တက်ခွင့်ရသည်။
* လိင်ဖျော်ဖြေမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း
* အဆို အတီး အက ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
* အနှိပ် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း
* ဧည့်သည် (နိုင်ငံခြားသားများ) များကို ဧည့်ခံခြင်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း
* အဖျော်ယမကာ တိုက်ကျွေးခြင်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း
ထိုသင်တန်းများ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပြီးသောအခါ ကျွမ်းကျင်သည့် အရည်အချင်းများကို လိုက်၍ ထိုမိန်းမလှလေးများကို အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု ၃ ခု ခွဲချလိုက်သည်။
1. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေနပ်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ – Manjokjo (만족조)
2. မာဆတ်ခ်ျ အနှိပ်အဖွဲ့ -Haengbokjo (h행복조) –
3. သီချင်းဆို/ အကအဖွဲ့ (တခါတရံ တကိုယ်လုံး ချွတ်၍ ကပြရသည်။) Gamujo (가무조)
သမ္မတက သဘောကျ၍ သူ့အတွက် လိင်မှုကိစ္စ ဖျော်ဖြေရန် အရွေးချယ်ခံရသော မိန်းကလေးများ ဆိုလျှင်တော့ ထိုမိန်းကလေးများသည် ထိုသမ္မတ၏ သီးသန့်အကြိုက် တို့ကို သိရှိရန် အထူးသင်တန်း တက်ကြရသည်။
သမ္မတကို ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးပေးရသည်မှ စ၍ အင်္ကျီဝတ်ပေးရသည်အထိ လိုလေသေးမရှိ အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်သင်ကြားရသည်။
တချို့ မိန်းမလှလေးများအား နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် လွှတ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှ သင်ယူလာသော နည်းလမ်းအသစ်များနှင့် သမ္မတကို စိတ်ပျော်အောင် ပြုစုတတ်စေရန် ဖြစ်သည်။
အသက် ၂၇ နှစ်ရောက်လျှင် အသက်ကြီးသွား၍ သမ္မတက အလိုမရှိတော့။ ထိုမိန်းကလေးတို့သည် စစ်တပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရတော့သည်။ ထိုအခါမှ မိဘဆွေမျိုးတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရသည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှကူးပြောင်းလာသော စစ်မှုထမ်း မိန်းမများသည် တခါတည်းနှင့် ရာထူးကောင်းကောင်း အမြှောက်စားခံရသည်။
သာမာန် စစ်အမှုထမ်း မိန်းမများသည် မည်သို့ဘဲ ကြိုးစားပါစေ ရာထူးကြီးကြီးရရန် မလွယ်ပေ။
အသက် ၂၇ နှစ် မပြည့်ခင် ( ဥပမာ မှတ်ဉာဏ်မကောင်း၊ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာကြောင့် အမာရွတ်တခု ရရှိ၊ စသည်) အကြောင်းတခုခုကြောင့် ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှ အပယ်ခံရသူများသည်လည်း မိဘဆွေမျိုးများထံ ပြန်ခွင့်မရှိပေ။
ထိုမိန်းကလေးများသည် အသက် ၂၇ ပြည့်သည်အထိ သတ်မှတ်ထားသောအဆောင်၌သာ နေရသည်။
ထိုမိန်းကလေးများအား သမ္မတလက်အောက်ရှိ ပထမတန်းစား အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ယောက်ျားသားများ ဓာတ်ပုံပြ၍ သူမကြိုက်သောယောက်ျားကို ရွေးချယ်စေသည်။ ထိုသူနှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူမက သဘောကျလျှင် လက်ထပ်ခွင့်ရှိသည်။
ထူးဆန်းသည်မှာ ထိုမိန်းကလေးများက ယောက်ျားများကို ရွေးချယ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများက ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပေ။
ထိုမိန်းကလေးများက သူမ လက်ထပ်ချင်သည့် ယောက်ျားမတွေ့လျှင် သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့၏ အကူ အလုပ်သမများအဖြစ် အသက်၂၇ နှစ် ပြည့်သည်အထိ နေထိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
၂၇ နှစ် ပြည့်လျှင် အခြား မိန်းမလှလေးများ နည်းတူ စစ်တပ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ထိုအခါမှ သူများနည်းတူ မိဘဆွေမျိုးတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရသည်။
သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှ ထိုမိန်းမလှလေးများသည် မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသနည်း…?
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် မိန်းကလေး တယောက်သည် သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့သို့ အရွေးချယ်ခံရလျှင် အလွန် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမသည် နိုင်ငံ၏ အလှဆုံးသော မင်းသမီးများဟု အသိအမှတ် ပြုခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများ၏ အနာဂတ်သည် တောက်ပနေသည်။ သူမဘဝ တသက်တာ ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ကင်းပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများ အားလုံးသည် နိုင်ငံတော်မှပေးသော လစာကောင်းကောင်း ( ၄,၇၀၀,၀၀၀ ဝမ် ) ရကြသည့်အပြင် သမ္မတတို့က သဘောကျလျှင် အပိုဆုငွေများလည်း ရကြသည်။
လက်ရှိ သမ္မတ ကင်ဂျောင်အွန်းဆိုလျှင် သူချစ်သော မိန်းကလေးတချို့အား အထူး နံပါတ်တပ်ထားသော မာစီးဒီးစ်ကား( Mercedes Benz ) များကို ပေးသည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ အပျော်ခရီး ထွက်ခွင့်လည်း ပေးသေးသည်။
အသက် ၂၇ နှစ် ကျော်သွားသဖြင့် စစ်တပ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသောမိန်းကလေးတို့သည် အတိတ်က သမ္မတသည် သူမအပေါ် ဘယ်အထိ အရေးပေးခဲ့သည် ဘယ်အဆင့်အထိချစ်တင်း နှီးနှောခဲ့သည်ကို မူတည်၍ ရာထူး အနိမ့် အမြင့် ရကြသည်။
အထူးသဖြင့် သမ္မတနှင့်အတူ အိပ်စက်ဖူးပါက အထူးအခွင့်အရေးများ အများဆုံး ရကြသည်။
အသက် ၂၇ ကျော်သွားသော်လည်း သမ္မတက အနားမှာ ရှိစေချင်သော မိန်းမလှများကတော့ စစ်တပ်ထဲ မဝင်ရပါ။
သမ္မတအနီး နေရသော အချက် အပြုတ် အိမ်အလုပ် စသည့် အလုပ်တာဝန်တခုခုကို အပေးခံရတတ်သည်။
သမ္မတ ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့ မှ ထိုမိန်းမလှလေးများအား မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် မည်သူကမျှ အထင်သေး ရှုံ့ချခြင်း မပြုရဲကြပါ။
ထိုမိန်းမလှလေးများသည် တနည်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်တွင် ဩဇာအာဏာ ရှိသူများလည်းဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများ အသက် ၂၇ ကျော်၍ သာမာန် လူတန်းစား အသိုင်းအဝိုင်းသို့ ကျင်လည်သည့်အခါ လက်ထပ်ချင်သူ များပြား၍ တလေးတစား အရေးပေးခြင်း ခံရသူများလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများ နေမကောင်းဖြစ်လျှင် အုပ်ချုပ်ရေး လူတန်းစားများသာ တက်ရောက် ဆေးကုသခွင့်ရသော အထူးဆေးရုံတွင် အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့် ရကြသည်။
သမ္မတနှင့် အထက်လူကြီးများနှင့် ရင်းနှီးသော ထိုမိန်းမလှလေးတချို့သည် မာနကြီး၍ မောက်မာကြသည်ဟုလည်း ဆို၏။
ပြည်သူတို့သည် ထိုမိန်းမလှလေးများ အသက်ကြီး၍ အဖွားကြီးဖြစ်နေပါစေ မလေးမခန့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်အောင် မလုပ်ရဲကြပေ။
ထူးဆန်းတာ နောက်တခု ရှိသေးသည်။
အသက် ၃၀ ကျော် မုဆိုးမ၊ တခုလပ် ၊ကလေးအမေတို့ အလွန် ချောမောလှပနေလျှင်လည်း ဒုတိယတန်းစား ပျော်တော်ဆက် အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရလေသည်။
ထိုမိန်းကလေးတို့သည် သမ္မတလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အထက်အရာရှိများ မကျန်းမမာဖြစ်လျှင် အလုပ်အကျွေး ပြုကြရသည်။ လိုအပ်လျှင် လိင်မှုကိစ္စပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုစုခြင်းများလည်းပြုလုပ်ပေးရသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုမိန်းမချောများသည် မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရသနည်း?
ထိုအမျိုးသမီးတို့၏ လစာကောင်းကောင်း ရသည့်အပြင် သားသမီးတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားရှိ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်သို့ စာမေးပွဲမဖြေပဲ အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် တက်ခွင့်ရလေသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့တွင် အလွန်လှပသော နိုင်ငံခြားသူများ ( များသောအားဖြင့် ရုရှားအမျိုးသမီးများ) လည်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ထိုမိန်းမလှလေးများသည် အလယ်တန်း ကျောင်းသူဘဝမှာပင် သူမတို့၏ ဘဝရည်မှန်းချက်မှာ ပျော်တော်ဆက် အလှပြ ဖျော်ဖြေရေးမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ကြပေမည်။
ဖျော်ဖြေရေးမယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းသည်ပင် သူမတို့အတွက် အောင်မြင်မှုနှင့် ဂုဏ်တက်စရာ ဖြစ်နေသည်။
ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာ ထိုတိုင်းပြည်၏ အာဏာရှင်တို့ ဖန်တီးထားသော စနစ်ဆိုးကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးတို့တွင် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့် မရှိ။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိ။
ထိုမိန်းကလေးတို့၏စိတ်တွင် သူမတို့သည် သွေး၊ ချွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တဘဝလုံးကို ပေးဆပ်ထားသော တာဝန်ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နေသော. ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြသော သူများဟု မိမိကိုယ်ကို မိမိ ခံယူထားကြလေသည်။
ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မောက်မာကြသည်။ ဘဝင် မြင့်ကြလေသည်။
စစ်အာဏာရှင် အစိုးရသည် တိုင်းသူပြည်သား အားလုံး ကို ခြောက်လှန့်ခြင်းနှင့် အကြောက်တရားအောက်တွင် ဟန်ချက်ညီအောင် အစီအစဉ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့သည် အထင်ရှားဆုံး ဥပမာဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် လောကနိယာမနှင့် မည်မျှပင် ကွာဟနေပါစေ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင်မူအထွတ်အထိပ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဖွယ်ဖြစ်နေသည်။
ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပြင်မှ တကယ့် လူ့အခွင့်အရေး တကယ့် အမှန်တရားကို သိချင်ကြမည်ထင်ပါသလား?
အကယ်၍ သူမတို့ အမှန်တရားကို သိလာခဲ့လျှင် သူတို့ တဘဝလုံး ကြိုးစား ထူးချွန် ဂုဏ်တက်ခဲ့သမျှ အရာအားလုံး သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ကုန်တော့မည် ဖြစ်သည်။
သူမတို့အတွက်တော့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေမည်။ သူမတို့ ဘဝသည်သာ အကောင်းဆုံးဟု ထင်နေကြပေမည်။
ဖျော်ဖြေရေးမယ် မိန်းမလှလေးများ၏ မိဘများသည် သူတို့ သမီးများ၏ ဘဝကို တကယ်ပင် ကျေနပ်ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူနေကြပါသလား?
ထိုမိန်းကလေးများနှင့် လက်ထပ်ကြသော ယောက်ျားများ၏ ခံစားချက်သည် မည်သို့ ရှိမည်နည်း?
အကြောက်တရား၏ အောက်တွင် ရှိသော အဖြေသည် သံသယဝင်ဖွယ်ရာ အတိပင်။
အာဏာရှင် သမ္မတတို့သည် သူတို့လိုချင်တာ မှန်သမျှကို ခြောက်လှန့်ခြင်းဖြင့် ရယူထားသည်။ ပြည်သူတို့ သွေးချွေးများနှင့် ရင်းထားသည့် ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ အခွန်အတုတ်တို့နှင့် စည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားနေသည်။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သူသည် တိုင်းပြည်၏ ဖခင် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများသည် သားသမီးများဖြစ်သည်။ ယခု ပြည်သူတွေမှာ ဆင်းရဲငတ်ပြတ်၊ အစာရေစာမရှိ၊ ရောဂါများ ထူပြောကာ လမ်းမများပေါ်၌ အေးခဲ သေဆုံးနေကြသဖြင့် ပြည်သူကို လူလို့ပင် သတ်မှတ်ပုံ မရတော့ပါ။
သူတို့သည် တိုင်းပြည်၏ သမီးပျိုများကို လက်ပါးစေ ငွေဝယ်ကျွန်များလို လိင်ကျွန်များလို ဆက်ဆံ၍ အသုံးတော်ခံနေသည့် အာဏာရ မုဒိမ်းကောင်ကြီးများသာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အာဏာရှင်တို့၏ စနစ်ဆိုးကြီးများ ကျဆုံးမှသာလျှင် ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာကြီးသည်လည်း အမှန်တကယ် ငြိမ်းအေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Source: မရွှေမိုး – ကိုရီးယား
ရနျကုနျ မွို့ ပနျးဆိုးတနျး က ညဉျ့ငှကျမလေး တယောကျရဲ့ ကိုဗဈကာလ ဖှငျ့ဟဝနျခံခကျြမြား
ရနျကုနျ မွို့ ပနျးဆိုးတနျး က ညဉျ့ငှကျမလေး တယောကျရဲ့ ကိုဗဈကာလ ဖှငျ့ဟဝနျခံခကျြမြား
သှားမလား အဈကို ကိုဗဈကာလမှာ လုပျစားရတာ အဆငျမပွလေို့ လမျးစရိတျကုနျပွီး အိမျပွနျသှားရတဲ့နတှေ့မြေားပါတယျ။ ရောဂါတှေ ဖွဈနတေော့ ဧညျ့သညျဆီက ရောဂါပိုးပါလာရငျလညျး ကူးခံရမှာပဲ။ အဲဒါတှလေညျး မကွောကျပါဘူး။ စားဝတျနရေေးအဆငျပွဖေို့ အဓိကပါပဲ။ ပနျးဆိုးတနျးမှာ ဒီအလုပျလုပျတာ ၁၅ နှဈရှိပွီ။ အဈမက ကနျြတဲ့နရောတှေ မသိဘူး။ ပနျးဆိုးတနျးပဲ
အဈမသိတယျ။ ရဲတှလေညျး အဈမကို မှတျမိနပေါပွီ။ ၂၀၁၆ လောကျက အဖမျးခံရတယျ။ ထောငျတဈနှဈကသြှားတယျ။ အငျးစိနျကနေ ရဲဘကျစခနျးရောကျတယျ။ ပွနျလှတျလာတော့လညျး အဈမ ဒီအလုပျပဲ ပွနျလုပျစားတယျ။ အခု အဈမအသကျက ၄၁ နှဈရှိပွီလဟေု တညျတညျငွိမျငွိမျဖွငျ့ ရှငျးပွပေးနသေူကတော့ ပနျးဆိုးတနျးမှာ ပွညျ့တနျဆာလုပျသကျ ၁၅ နှဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့
ရိုစီ(အမညျလှဲ) ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျက ကှဲသှားတာ။ အဈမအမြိုးသားနဲ့ ကှဲပွီးသိပျမကွာခငျမှာ သူက ဆုံးသှားတယျ။ အဈမလညျး အဲဒီခြိနျက စပွီး ဒီဘဝရောကျလာတာ။ သားလေးတဈယောကျရှိတယျ။ သူမသိပါဘူး ဒီအလုပျလုပျစားတယျဆိုတာ။ သားလေးကတော့ လိမ်မာပါတယျ။ ကြှနျမ ပနျးဆိုးတနျးကို ၂ နာရီလောကျရောကျတယျ။ ထမငျးခြိုငျ့ထညျ့လာတယျ
အိမျကနေ။ အလုပျက မတျတတျ တဈခြိနျလုံးရပျပွီး ဧညျ့သညျစောငျ့ရတာလေ။ ဧညျ့သညျမရတာ ကွာလာရငျ ဗိုကျတှဆောလာရော။ ဆိုငျက ဝယျစားရငျလညျး စရိတျက မသကျသာဘူး။ ကိုဗဈမဖွဈခငျကတော့ တဈနေ့ သုံးလေးခေါကျ ရပါတယျ။ ဧညျ့သညျတဈခေါကျဆို အနညျးဆုံး တဈသောငျးလောကျရတယျ။ အခုခြိနျကတော့ ကြှနျမ ငါးထောငျနဲ့လညျး လိုကျတယျ။ အသကျက
ကွီးလာပွီဆိုတော့ အပွငျအဆငျကောငျးမှ။ လာချေါတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေ ကွညျ့ကောငျးမှ ကိုယျ့ကိုချေါတာ။ ဖျောသငျ့တာတော့ ဖျောထားရတယျ။ အဈမတို့အရှယျက မောငျလေးတှေ လာလာချေါတာ မြားတယျ။ အခုခတျေအဖိုးကွီးတှကေ ငယျတဲ့သူကို ချေါကွတာမြားတယျဟု ရိုစီ(အမညျလှဲ) က ရှငျးပွသညျ။ တဈညလုံးချေါရငျ သုံးလေးသောငျးရတယျ။ အဈမက အပွုအစုကောငျးတော့
ပိုပေးကွပါတယျ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောရရငျ ငါးသောငျးလောကျ ပေးမယျဆိုရငျတော့ အကာအကှယျ မပါလဲ အဈမက နပေေးပါတယျ။ ပိုကျဆံက ရှာရသလောကျ ရှာရတာပဲ။ ဒီကာလမှာ ဈေးဦးမပေါကျတဲ့နဆေို့ရငျ ရှိတာပေါငျနှံစားရတာ မလှယျဘူး။ အလုပျတူလုပျတဲ့အထဲက အဈမတဈယောကျက ငှတေိုးခြေးစားတာ ရှိတယျ။ ဈေးဦးမပေါကျတဲ့နတှေ့ကေရြငျ သူ့ဆီက ခြေးရတာ။ တဈသောငျးယူရငျ
တဈနတေ့ဈထောငျ ၁၃ ရကျသှငျးရတယျ။ သူလညျး ဈေးဦးမပေါကျတဲ့ရကျတှေ ရှိကွတာပဲ။ ကိုဗဈကာလထဲမှာတော့ ဘယျသူမှ အခေါကျရေ မမြားကွပါဘူး။ ကိုယျ့ဖောကျသညျနဲ့ကိုယျပါပဲ။ အရငျခြိနျတှမှောတော့ တဈရကျကို ငါးခေါကျလောကျ ရကွတယျ။ ညအိပျလိုကျရတာလညျး ရှိပါတယျ။ ၁၂ နာရီ ကြျောတာနဲ့ အပွငျမထှကျရဘူးဆိုတော့ ပနျးဆိုးတနျးကနေ ၉ နာရီနောကျဆုံးထားပွီး ပွနျကွရတာပဲ။
အဈမကလညျး ဒီအလုပျပဲ လုပျတတျတော့ ကိုဗဈပွီးသှားလညျး ဒါပဲဆကျလုပျရမှာပါပဲ။ သားလေးအတှကျလညျး ရှာရဦးမှာပေါ့။
ရန်ကုန် မြို့ ပန်းဆိုးတန်း က ညဉ့်ငှက်မလေး တယောက်ရဲ့ ကိုဗစ်ကာလ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်များ
သွားမလား အစ်ကို ကိုဗစ်ကာလမှာ လုပ်စားရတာ အဆင်မပြေလို့ လမ်းစရိတ်ကုန်ပြီး အိမ်ပြန်သွားရတဲ့နေ့တွေများပါတယ်။ ရောဂါတွေ ဖြစ်နေတော့ ဧည့်သည်ဆီက ရောဂါပိုးပါလာရင်လည်း ကူးခံရမှာပဲ။ အဲဒါတွေလည်း မကြောက်ပါဘူး။ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့ အဓိကပါပဲ။ ပန်းဆိုးတန်းမှာ ဒီအလုပ်လုပ်တာ ၁၅ နှစ်ရှိပြီ။ အစ်မက ကျန်တဲ့နေရာတွေ မသိဘူး။ ပန်းဆိုးတန်းပဲ
အစ်မသိတယ်။ ရဲတွေလည်း အစ်မကို မှတ်မိနေပါပြီ။ ၂၀၁၆ လောက်က အဖမ်းခံရတယ်။ ထောင်တစ်နှစ်ကျသွားတယ်။ အင်းစိန်ကနေ ရဲဘက်စခန်းရောက်တယ်။ ပြန်လွတ်လာတော့လည်း အစ်မ ဒီအလုပ်ပဲ ပြန်လုပ်စားတယ်။ အခု အစ်မအသက်က ၄၁ နှစ်ရှိပြီလေဟု တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် ရှင်းပြပေးနေသူကတော့ ပန်းဆိုးတန်းမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်သက် ၁၅ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့
ရိုစီ(အမည်လွဲ) ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်က ကွဲသွားတာ။ အစ်မအမျိုးသားနဲ့ ကွဲပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ သူက ဆုံးသွားတယ်။ အစ်မလည်း အဲဒီချိန်က စပြီး ဒီဘဝရောက်လာတာ။ သားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမသိပါဘူး ဒီအလုပ်လုပ်စားတယ်ဆိုတာ။ သားလေးကတော့ လိမ္မာပါတယ်။ ကျွန်မ ပန်းဆိုးတန်းကို ၂ နာရီလောက်ရောက်တယ်။ ထမင်းချိုင့်ထည့်လာတယ်
အိမ်ကနေ။ အလုပ်က မတ်တတ် တစ်ချိန်လုံးရပ်ပြီး ဧည့်သည်စောင့်ရတာလေ။ ဧည့်သည်မရတာ ကြာလာရင် ဗိုက်တွေဆာလာရော။ ဆိုင်က ဝယ်စားရင်လည်း စရိတ်က မသက်သာဘူး။ ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ တစ်နေ့ သုံးလေးခေါက် ရပါတယ်။ ဧည့်သည်တစ်ခေါက်ဆို အနည်းဆုံး တစ်သောင်းလောက်ရတယ်။ အခုချိန်ကတော့ ကျွန်မ ငါးထောင်နဲ့လည်း လိုက်တယ်။ အသက်က
ကြီးလာပြီဆိုတော့ အပြင်အဆင်ကောင်းမှ။ လာခေါ်တဲ့ ဧည့်သည်တွေက ကြည့်ကောင်းမှ ကိုယ့်ကိုခေါ်တာ။ ဖော်သင့်တာတော့ ဖော်ထားရတယ်။ အစ်မတို့အရွယ်က မောင်လေးတွေ လာလာခေါ်တာ များတယ်။ အခုခေတ်အဖိုးကြီးတွေက ငယ်တဲ့သူကို ခေါ်ကြတာများတယ်ဟု ရိုစီ(အမည်လွဲ) က ရှင်းပြသည်။ တစ်ညလုံးခေါ်ရင် သုံးလေးသောင်းရတယ်။ အစ်မက အပြုအစုကောင်းတော့
ပိုပေးကြပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ငါးသောင်းလောက် ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အကာအကွယ် မပါလဲ အစ်မက နေပေးပါတယ်။ ပိုက်ဆံက ရှာရသလောက် ရှာရတာပဲ။ ဒီကာလမှာ ဈေးဦးမပေါက်တဲ့နေ့ဆိုရင် ရှိတာပေါင်နှံစားရတာ မလွယ်ဘူး။ အလုပ်တူလုပ်တဲ့အထဲက အစ်မတစ်ယောက်က ငွေတိုးချေးစားတာ ရှိတယ်။ ဈေးဦးမပေါက်တဲ့နေ့တွေကျရင် သူ့ဆီက ချေးရတာ။ တစ်သောင်းယူရင်
တစ်နေ့တစ်ထောင် ၁၃ ရက်သွင်းရတယ်။ သူလည်း ဈေးဦးမပေါက်တဲ့ရက်တွေ ရှိကြတာပဲ။ ကိုဗစ်ကာလထဲမှာတော့ ဘယ်သူမှ အခေါက်ရေ မများကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဖောက်သည်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ အရင်ချိန်တွေမှာတော့ တစ်ရက်ကို ငါးခေါက်လောက် ရကြတယ်။ ညအိပ်လိုက်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ၁၂ နာရီ ကျော်တာနဲ့ အပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတော့ ပန်းဆိုးတန်းကနေ ၉ နာရီနောက်ဆုံးထားပြီး ပြန်ကြရတာပဲ။
အစ်မကလည်း ဒီအလုပ်ပဲ လုပ်တတ်တော့ ကိုဗစ်ပြီးသွားလည်း ဒါပဲဆက်လုပ်ရမှာပါပဲ။ သားလေးအတွက်လည်း ရှာရဦးမှာပေါ့။
တဈရှာလုံးနီးပါးရဟနျး၊ကိုရငျဝတျပွီး ပရိယတျ၊ပရိပတျ အားထုတျနကွေတဲ့ ရပျစောကျမွို့နယျထဲ မှ အေးခမျြးသာရှာလေး
January 24, 2022 by Zaw Hein
အလှူခံပိုဈ့ပါ။ရပျစောကျမွို့နယျထဲမှာအေးခမျြးသာဆိုတဲ့ ရှာလေးတဈရှာရှိပါတယျ။ထူးဆနျးတာတဈခုက တဈရှာလုံးနီးပါးဟာရဟနျး ၊ ကိုရငျဝတျပွီးပရိယတျ ၊ ပရိပတျ အားထုတျနကွေတာပါပဲ။
၂၀၁၅ ဝနျးကငျြက ရှမျးပွညျနယျတလှား စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှအေတှကျရပျစောကျနားမှာ နရောခပြေးရာကနရှောငယျလေးတှေ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။အဲဒီရှာတှကေ ဓနု ပအိုဝျ ပလောငျစတဲ့တိုငျးရငျးသားလူငယျလေးတှဟောဓလထေုံ့းစံအတိုငျး ကိုရငျ ရဟနျးဝတျရာကနေ ပွနျမထှကျတော့ဘဲ
အေးခမျြးသာရှာလေးမှာ တောရဆောကျတညျ စုစညျးနထေိုငျကွပါတော့တယျ။ကြှနျတေျာ့ကို လှူနကြေ အလှူရှငျတှသေိပါတယျကြှနျတျော အဲဒီရှာလေးကို အမွဲတမျးလှူဒါနျးပါ
တယျ။ရဟနျးတျောတှတေငျမက ကိုရငျတှပေါကွညျညိုဖှယျရာ ဝိနညျးကို လေးစားလိုကျနာကွလို့ပါ။အခုလညျး ဆရာတျောကွီးဆီကနဆှေမျးဆနျ အခကျအခဲ တျောတျောလေးဒုက်ခရောကျနကွေကွောငျးသတငျးစကားကွားရပါတယျ။
ဒီကာလမှာ ကြှနျတျော အလှူမခံခငျြပါ။အရေးကွီးရာတှကေို ကူကွ လှူကွရတဲ့အပွငျအားလုံးက စီးပှားရေးလညျး ကနြကွေတော့အားနာရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ
တို့အတှကျအကြိုးကြေးဇူးမြားတဲ့အပွငျ ပီတိဖွဈစရာ ကုသိုလျလေးတဈခု ပွုဖို့ နိဗ်ဗာနျဆျောလေးလုပျလိုကျပါအုံးမယျလဆေိုပွီးပိုဈ့လေးတငျလိုကျပါတယျ။ဆနျတဈအိပျ ငါးသောငျး နဲ့ဆီတဈပုံး ငါးသောငျးဝနျးကငျြရှိပါတယျ။နညျးမြားမဆို ကုသိုလျပါဝငျနိုငျပါတယျခငျဗြာ။ဆကျသှယျရနျ Facebook – Ko Soe Htike PhaDo
အလှူခံပိုစ့်ပါ။ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲမှာအေးချမ်းသာဆိုတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာရှိပါတယ်။ထူးဆန်းတာတစ်ခုက တစ်ရွာလုံးနီးပါးဟာရဟန်း ၊ ကိုရင်ဝတ်ပြီးပရိယတ် ၊ ပရိပတ် အားထုတ်နေကြတာပါပဲ။
၂၀၁၅ ဝန်းကျင်က ရှမ်းပြည်နယ်တလွှား စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရပ်စောက်နားမှာ နေရာချပေးရာကနေရွာငယ်လေးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရွာတွေက ဓနု ပအိုဝ် ပလောင်စတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်လေးတွေဟာဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ကိုရင် ရဟန်းဝတ်ရာကနေ ပြန်မထွက်တော့ဘဲ
အေးချမ်းသာရွာလေးမှာ တောရဆောက်တည် စုစည်းနေထိုင်ကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော့်ကို လှူနေကျ အလှူရှင်တွေသိပါတယ်ကျွန်တော် အဲဒီရွာလေးကို အမြဲတမ်းလှူဒါန်းပါ
တယ်။ရဟန်းတော်တွေတင်မက ကိုရင်တွေပါကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဝိနည်းကို လေးစားလိုက်နာကြလို့ပါ။အခုလည်း ဆရာတော်ကြီးဆီကနေဆွမ်းဆန် အခက်အခဲ တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြကြောင်းသတင်းစကားကြားရပါတယ်။
ဒီကာလမှာ ကျွန်တော် အလှူမခံချင်ပါ။အရေးကြီးရာတွေကို ကူကြ လှူကြရတဲ့အပြင်အားလုံးက စီးပွားရေးလည်း ကျနေကြတော့အားနာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
တို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့အပြင် ပီတိဖြစ်စရာ ကုသိုလ်လေးတစ်ခု ပြုဖို့ နိဗ္ဗာန်ဆော်လေးလုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်လေဆိုပြီးပိုစ့်လေးတင်လိုက်ပါတယ်။ဆန်တစ်အိပ် ငါးသောင်း နဲ့ဆီတစ်ပုံး ငါးသောင်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။နည်းများမဆို ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်သွယ်ရန် Facebook – Ko Soe Htike PhaDo
ယခုကာလကွီးမှာ အမြိုးသမီးမြား လုံးဝမလုပျသငျ့တဲ့ အလုပျ(၁၂)ခု
ယခုကာလကွီးမှာ အမြိုးသမီးမြား လုံးဝမလုပျသငျ့တဲ့ အလုပျ(၁၂)ခု လုပျမိနရေငျ ခကျြခငျြးရပျပဈလိုကျပါ။ သတိ၊အမြိုးသမီးမြားဖတျရနျ။
အနာဂတျမှာအခကျအခဲ မတှခေ့ငျြရငျအောကျပါ အလုပျမြားမလုပျရနျ သတိပေးခငျြပါတယျ။ (၁)နတေို့ငျးဝငျငှမေရှိပဲ စုမဲမြားစုခွငျး။ (၂)ထီအမြိုးမြိုးထိုးခွငျး။ (၃)အတိုးမကျပွီးငှခြေေးခွငျး။
(၄)အားနာပွီးငှခြေေးခွငျး။ (၅)မကျြနှာရမလားလို့ ကွားဝငျ အာမခံခွငျး။ (၆)သူမြားအထငျကွီးအောငျ မရှိကိုအရှိဟနျဆောငျလုပျပွခွငျး။ (၇)သူမြားကိုအထငျကွီးပွီး လုပျငနျးနားမလညျပဲ ရှယျယာထညျ့ခွငျး။
(၈)လုပျငနျးနားမလညျပဲ သူမြားအကွံပေးသညျ့အတိုငျး အလုပျလုပျခွငျး။ (၉)လုပျငနျးမကြှမျးကငျြပဲတိုးခြဲ့ခွငျး။ (၁၀)လငျနှငျ့ဆှမြေိုးမြားထံမှ မကျြနှာရအောငျ ငှခြေေးငှါးပေးခွငျး။ (၁၁)အတိုးပျေါအတိုးဆငျ့ ငှခြေေးသံသရာမှမထှကျခွငျး။
(၁၂)ဘာမှနားမလညျပဲ အောငျမွငျမှုကို အလငျြအမွနျလိုခငျြခွငျး။ အထကျပါ(၁၂)ခကျြကို တခကျြစီစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဒီအထဲမှာပါနပွေီလားစီစဈပါ။ မလုပျရသေးရငျ လုံးဝမလုပျပါနဲ့။ လုပျလကျစဖွဈနရေငျရပျတနျ့ပါ။
လုပျပွီးသားဖွဈလို့ ဒုက်ခပငျလယျဝနေရေငျ ကိုယျ့အပွဈကိုယျခံပါ။ သငျခနျးစာယူပါ။ အမွနျဆုံးဖွဈတဲ့နညျးနဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးပါ။ ကြှနျမမှာပိုကျဆံ သိနျး(၅၀)ရှိပါတယျ။ အခုခြိနျဘာလုပျသငျ့လဲ မေးနသေူတှအေတှကျ အဖွကေမကွာခငျ အပွောကောငျးသူနဲ့တှပွေီ့း အလိမျခံရပါတော့မယျပဲဖွဈပါတယျ။
ဘာလုပျရမလဲမသိရငျ ဘာမှမလုပျပါနဲ့။ ရှိတဲ့ပိုကျဆံကို ကွျောငွာနမှေတော့ လူလိမျခံရတာ မဆနျးပါဘူး။ စီးပှါးရေးမကောငျးတာကို အခှငျ့အရေးယူပွီးလူလိမျတှေ ခွခေငျြးလိမျနတေဲ့အခြိနျပါ။
သတိကိုကွီးကွီးထားပွီး နရေမယျ့အခြိနျမှာ အားအားနလေိုငျးပျေါတကျပွီး ကိုယျ့အပူကိုရငျဖှငျ့တတျတဲ့ အကငျြ့ကိုပွုပွငျကွပါရှငျ။ Credit
ယခုကာလကြီးမှာ အမျိုးသမီးများ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်(၁၂)ခု လုပ်မိနေရင် ချက်ချင်းရပ်ပစ်လိုက်ပါ။ သတိ၊အမျိုးသမီးများဖတ်ရန်။
အနာဂတ်မှာအခက်အခဲ မတွေ့ချင်ရင်အောက်ပါ အလုပ်များမလုပ်ရန် သတိပေးချင်ပါတယ်။ (၁)နေ့တိုင်းဝင်ငွေမရှိပဲ စုမဲများစုခြင်း။ (၂)ထီအမျိုးမျိုးထိုးခြင်း။ (၃)အတိုးမက်ပြီးငွေချေးခြင်း။
(၄)အားနာပြီးငွေချေးခြင်း။ (၅)မျက်နှာရမလားလို့ ကြားဝင် အာမခံခြင်း။ (၆)သူများအထင်ကြီးအောင် မရှိကိုအရှိဟန်ဆောင်လုပ်ပြခြင်း။ (၇)သူများကိုအထင်ကြီးပြီး လုပ်ငန်းနားမလည်ပဲ ရှယ်ယာထည့်ခြင်း။
(၈)လုပ်ငန်းနားမလည်ပဲ သူများအကြံပေးသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း။ (၉)လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ပဲတိုးချဲ့ခြင်း။ (၁၀)လင်နှင့်ဆွေမျိုးများထံမှ မျက်နှာရအောင် ငွေချေးငှါးပေးခြင်း။ (၁၁)အတိုးပေါ်အတိုးဆင့် ငွေချေးသံသရာမှမထွက်ခြင်း။
(၁၂)ဘာမှနားမလည်ပဲ အောင်မြင်မှုကို အလျင်အမြန်လိုချင်ခြင်း။ အထက်ပါ(၁၂)ချက်ကို တချက်စီစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒီအထဲမှာပါနေပြီလားစီစစ်ပါ။ မလုပ်ရသေးရင် လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်လက်စဖြစ်နေရင်ရပ်တန့်ပါ။
လုပ်ပြီးသားဖြစ်လို့ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေရင် ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်ခံပါ။ သင်ခန်းစာယူပါ။ အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။ ကျွန်မမှာပိုက်ဆံ သိန်း(၅၀)ရှိပါတယ်။ အခုချိန်ဘာလုပ်သင့်လဲ မေးနေသူတွေအတွက် အဖြေကမကြာခင် အပြောကောင်းသူနဲ့တွေ့ပြီး အလိမ်ခံရပါတော့မယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလုပ်ရမလဲမသိရင် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ ရှိတဲ့ပိုက်ဆံကို ကြော်ငြာနေမှတော့ လူလိမ်ခံရတာ မဆန်းပါဘူး။ စီးပွါးရေးမကောင်းတာကို အခွင့်အရေးယူပြီးလူလိမ်တွေ ခြေချင်းလိမ်နေတဲ့အချိန်ပါ။
သတိကိုကြီးကြီးထားပြီး နေရမယ့်အချိန်မှာ အားအားနေလိုင်းပေါ်တက်ပြီး ကိုယ့်အပူကိုရင်ဖွင့်တတ်တဲ့ အကျင့်ကိုပြုပြင်ကြပါရှင်။ Credit
January 23, 2022 by Zaw Hein
သီရိလင်ျကာကြောကျမကျြရတနာကုမ်ပဏီ Topline က သဘာဝအပွာရောငျနီလာကို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ ။ အလေးခြိနျ 683 ပေါငျရှိတဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ အကွီးဆုံးကြောကျမကျြရတနာကို အာရှဘုရငျမအဖွဈ လူသိမြားပါတယျ ။ သီရိလင်ျကာကြောကျမကျြရတနာနဲ့
ကြောကျမကျြအဂေငျြစီ ဥက်ကဋ်ဌ Thiluck Weerasingh က ထိုရှာဖှတှေရှေိ့မှုဟာ အရေးကွီးဆုံးနဲ့ အကွီးကယျြဆုံးလို့ ယူဆကွောငျး ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ ။ Forbes မဂ်ဂဇငျးက ထိုနီလာသတ်တုရိုငျးကို ဖွုတျလိုကျလြှငျ ဈေးနှုနျးအကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၁၀၀ သို့မဟုတျ ဘတျ ၃.၃ ဘီလီယံနီးပါးခနျ့ရှိတဲ့ မင်ျဂလာလကျစှပျ 1,549,016 ခုအထိ ပွောငျးလဲနိုငျတယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။
ထို့အပွငျ အရေးကွီးတဲ့ ကြောကျမကျြရတနာ အမြားအပွားကိုလညျး တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ ။ “Bluebell of Asia” ၊ ၃၉၂ ကာရကျရှိ နီလာဟာ ဒျေါလာ ၁၇.၅ သနျးဖွငျ့ ဈေးကှကျသို့
ထိုးဖောကျဝငျရောကျနိုငျတဲ့အပွငျ နယူးယောကျမွို့ရှိ သဘာဝသမိုငျးပွတိုကျမှာ ပွသထားသညျ့ ရှားပါး ‘အိန်ဒိယကွယျ’ နီလာကို သီရိလင်ျကာမှာလညျး ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ ။
အကြမ်းဖျင်းဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်မျက်ရတနာလို့ လူသိများတဲ့ နီလာအရိုင်းတုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ – ရုပ်သံ
သီရိလင်္ကာကျောက်မျက်ရတနာကုမ္ပဏီ Topline က သဘာဝအပြာရောင်နီလာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အလေးချိန် 683 ပေါင်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးကျောက်မျက်ရတနာကို အာရှဘုရင်မအဖြစ် လူသိများပါတယ် ။ သီရိလင်္ကာကျောက်မျက်ရတနာနဲ့
ကျောက်မျက်အေဂျင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ Thiluck Weerasingh က ထိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ ယူဆကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ Forbes မဂ္ဂဇင်းက ထိုနီလာသတ္တုရိုင်းကို ဖြုတ်လိုက်လျှင် ဈေးနှုန်းအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ သို့မဟုတ် ဘတ် ၃.၃ ဘီလီယံနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ မင်္ဂလာလက်စွပ် 1,549,016 ခုအထိ ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ထို့အပြင် အရေးကြီးတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ အများအပြားကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ “Bluebell of Asia” ၊ ၃၉၂ ကာရက်ရှိ နီလာဟာ ဒေါ်လာ ၁၇.၅ သန်းဖြင့် ဈေးကွက်သို့
ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အပြင် နယူးယောက်မြို့ရှိ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်မှာ ပြသထားသည့် ရှားပါး ‘အိန္ဒိယကြယ်’ နီလာကို သီရိလင်္ကာမှာလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ထိုငျးတှငျ ကားမှောကျသဆေုံးခဲ့သညျ့ မွနျမာ၃ဦး၏ အာမခံလြျောကွေးငှေ ထုတျယူရနျ မွနျမာ အလုပျသမား သံအရာရှိရုံးသို့ မိသားစုဝငျမြား ဆကျသှယျစလေို
ထိုငျးတှငျ ကားမှောကျသဆေုံးခဲ့သညျ့ မွနျမာ၃ဦး၏ အာမခံလြျောကွေးငှေ ထုတျယူရနျ မိသားစုဝငျမြား ဆကျသှယျစလေို ထိုငျးနိုငျငံ အယုဒ်ဓယခရိုငျ မဟာရတျမွို့နယျ အတှငျး မျောတျောယာဉျ တိမျးမှောကျမှု၌ သဆေုံး ခဲ့သညျ့ မွနျမာသုံးဦး ရရှိမညျ့ အာမခံ လြျောကွေးငှမြေားအတှကျ မွနျမာနိုငျငံရှိ ၎င်းငျးတို့၏ မိဘဆှမြေိုးမြား ဆကျသှယျပေးရနျ ထိုငျးနိုငျငံ မွနျမာအလုပျသမား သံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office က ထုတျပွနျ ထားသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ နံနကျ ၇ နာရီတှငျ ထိုငျးနိုငျငံ အယုဒ်ဓယခရိုငျ မဟာရတျမွို့နယျအတှငျး အလုပျသမားမြား တငျဆောငျလာသညျ့ မျောတျောယာဉျ တိမျးမှောကျမှု ဖွဈပှားမှု၌ ပါဝငျသညျ့ ၁၈ ဦးတှငျ သုံးဦး သဆေုံးခဲ့သညျဟု မွနျမာ အလုပျသမား သံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office ၏ ထုတျပွနျ ကွငွောခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
သဆေုံးသူ သုံးဦးမှာ ကြိုကျထိုမွို့နယျ မုပ်ပလငျကြေးရှာမှ ကိုရူပ၊ ဘီးလငျးမွို့နယျ ကခြတျခြောငျး ကြေးရှာမှ ကိုလငျးထကျဦး နှငျ့ ဥတ်တရသီရိမွို့နယျ မိုးစှရှောမှ ဦးတငျဇငျဦးတို့ ဖွဈသညျ။အဆိုပါ သဆေုံးသူ သုံးဦး၏ သကျဆိုငျရာ မိသားစုဝငျမြားကို လကျရှိတှငျ ခြိတျဆကျ၍ မရသေးဟု သံအရာရှိရုံးက ဆိုထားသညျ။
ထို့အတှကျ ၎င်းငျးတို့၏ မျောတျောယာဉျ ထိခိုကျမှုအာမခံ လြျောကွေးငှမြေား ထုတျယူရနျ မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးရှိ မိသားစုဝငျမြား၏ ဆကျသှယျနိုငျမညျ့ ဖုနျးနံပါတျမြား သိရှိပါက မွနျမာ အလုပျသမား သံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office ၏ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာနှငျ့ ရုံးဖုနျးသို့ ဆကျသှယျ ပေးပို့ရနျ ထုတျပွနျထားသညျ။
ထိုင်းတွင် ကားမှောက်သေဆုံးခဲ့သည့် မြန်မာ၃ဦး၏ အာမခံလျော်ကြေးငွေ ထုတ်ယူရန် မိသားစုဝင်များ ဆက်သွယ်စေလို ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယခရိုင် မဟာရတ်မြို့နယ် အတွင်း မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု၌ သေဆုံး ခဲ့သည့် မြန်မာသုံးဦး ရရှိမည့် အာမခံ လျော်ကြေးငွေများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၎င်းတို့၏ မိဘဆွေမျိုးများ ဆက်သွယ်ပေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာအလုပ်သမား သံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office က ထုတ်ပြန် ထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယခရိုင် မဟာရတ်မြို့နယ်အတွင်း အလုပ်သမားများ တင်ဆောင်လာသည့် မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားမှု၌ ပါဝင်သည့် ၁၈ ဦးတွင် သုံးဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု မြန်မာ အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office ၏ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးသူ သုံးဦးမှာ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် မုပ္ပလင်ကျေးရွာမှ ကိုရူပ၊ ဘီးလင်းမြို့နယ် ကျခတ်ချောင်း ကျေးရွာမှ ကိုလင်းထက်ဦး နှင့် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် မိုးစွေရွာမှ ဦးတင်ဇင်ဦးတို့ ဖြစ်သည်။အဆိုပါ သေဆုံးသူ သုံးဦး၏ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုဝင်များကို လက်ရှိတွင် ချိတ်ဆက်၍ မရသေးဟု သံအရာရှိရုံးက ဆိုထားသည်။
ထို့အတွက် ၎င်းတို့၏ မော်တော်ယာဉ် ထိခိုက်မှုအာမခံ လျော်ကြေးငွေများ ထုတ်ယူရန် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မိသားစုဝင်များ၏ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်များ သိရှိပါက မြန်မာ အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာနှင့် ရုံးဖုန်းသို့ ဆက်သွယ် ပေးပို့ရန် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လပိုငျးသာ နရေတော့မယျဆိုလို့ ရှိသမြှငှတှေေ ဖွုနျးတီးတဲ့ အဖိုးအို 15 နှဈကွာ ဘာမှမဖွဈသေး
Ron ဟာ အခုဆို အသကျ 84 ထိ ရောကျနပွေီဖွဈပွီး၊ ကနျြးကနျြးမာမာ ရှငျသနျနထေိုငျဆဲ ဖွဈပါတယျ။သူဟာဇနီးသညျနဲ့အတူဘာမငျဂမျမွို့ Marston Green မှာ နထေိုငျနဆေဲ ဖွဈပွီး၊ လကျရှိအခြိနျမှာ မွေးနှဈယောကျ ရှိပွီဖွဈပါတယျ။တကယျ တော့ လှနျခဲ့တဲ့ 15 နှဈခနျ့တုနျးက သူ ခြောငျးတှေ ဆိုးလှနျလို့ သှားရောကျစဈဆေးခံစဉျ ဆရာဝနျတှပွေောတဲ့ သတငျးဆိုးကို ကွားခဲ့ရတာပါ။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီခြောငျးဆိုးရောဂါဟာ အာဂန်တုခြောငျးဆိုးရောဂါသာ ဖွဈပွီး၊ Ron ကတော့ သူဟာ လာမညျ့သုံးလလောကျဆိုရငျ လူ့ပွညျမှာ သခြောပေါကျ နရေဖို့မသခြောတော့ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ကာ စုဆောငျးထားသမြှ ပေါငျ 50000 ကိုတောငျ ပြျောပြျောပါးပါး ဖွုနျးတီးပဈခဲ့ပါတယျ။
Ron ဟာ ယခငျက ဆောကျလုပျရေးအလုပျသမားတဈယောကျ ဖွဈပွီး၊ သူ့ရဲ့ သတငျးဆိုးကွောငျ့ ဈေးဝယျထှကျခွငျး၊ ပေါငျ 20000 တနျ မာစီးဒီကားဝယျခွငျး၊ စဈကွိုခတျေက ကားပုံစံငယျမြား ပွုလုပျခွငျးနဲ့ ဘဝအခြိနျတှကေို ဖွုနျးတီး ခဲ့ပါတယျ။ အဖိုးတနျ လပျကီးငါး7ကောငျဝယျခဲ့လို့ ပေါငျ 3650 ကုနျကခြဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့ငှတှေသောကုနျသှားခဲ့ပွီး၊Ronဟာသုံးလကွာလညျးမသေ၊တဈနှဈကွာလညျးကနျြးမာရေးကောငျးဆဲ၊အခု15နှဈကွျောကွာတဲ့အထိ ကနျြးမာရေးက အဆငျပွနေဆေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ဖွဈရခွငျး အကွောငျးအရငျးမှာ Clover အရှကျ (သုံးလှာတဈရှကျ ရစေပျစပျပေါကျသညျ့ အပငျငယျတဈမြိုး) ကွောငျ့လို့ Ron က ယူဆနပေါတယျ။
သူ့မှာရှိနတေဲ့ Cloverဟာရှားရှားပါးပါး4လှာပါဝငျတဲ့အရှကျဖွဈလို့ဒီအခကျြကွောငျ့သူကကံကောငျးတယျလို့တှေးကာအဲဒီအရှကျကလေးကို သှားလရောဆောငျသှားတဲ့ အလအေ့ထကိုတောငျ စှဲမွဲနပွေီလို့ Ron က ဆိုပါတယျ။ အခုအခြိနျထိတော့ Ron ဟာ အသကျ 82 နှဈအတူ ပြျောရှငျစှာ နထေိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
လပိုင်းသာ နေရတော့မယ်ဆိုလို့ ရှိသမျှငွေတွေ ဖြုန်းတီးတဲ့ အဖိုးအို 15 နှစ်ကြာ ဘာမှမဖြစ်သေး
Ron ဟာ အခုဆို အသက် 84 ထိ ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး၊ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှင်သန်နေထိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဇနီးသည်နဲ့အတူဘာမင်ဂမ်မြို့ Marston Green မှာ နေထိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိအချိန်မှာ မြေးနှစ်ယောက် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တကယ် တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 15 နှစ်ခန့်တုန်းက သူ ချောင်းတွေ ဆိုးလွန်လို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခံစဉ် ဆရာဝန်တွေပြောတဲ့ သတင်းဆိုးကို ကြားခဲ့ရတာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီချောင်းဆိုးရောဂါဟာ အာဂန္တုချောင်းဆိုးရောဂါသာ ဖြစ်ပြီး၊ Ron ကတော့ သူဟာ လာမည့်သုံးလလောက်ဆိုရင် လူ့ပြည်မှာ သေချာပေါက် နေရဖို့မသေချာတော့ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ကာ စုဆောင်းထားသမျှ ပေါင် 50000 ကိုတောင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။
Ron ဟာ ယခင်က ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး၊ သူ့ရဲ့ သတင်းဆိုးကြောင့် ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ ပေါင် 20000 တန် မာစီးဒီကားဝယ်ခြင်း၊ စစ်ကြိုခေတ်က ကားပုံစံငယ်များ ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ဘဝအချိန်တွေကို ဖြုန်းတီး ခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးတန် လပ်ကီးငါး7ကောင်ဝယ်ခဲ့လို့ ပေါင် 3650 ကုန်ကျခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်ငွေတွေသာကုန်သွားခဲ့ပြီး၊Ronဟာသုံးလကြာလည်းမသေ၊တစ်နှစ်ကြာလည်းကျန်းမာရေးကောင်းဆဲ၊အခု15နှစ်ကြော်ကြာတဲ့အထိ ကျန်းမာရေးက အဆင်ပြေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ Clover အရွက် (သုံးလွှာတစ်ရွက် ရေစပ်စပ်ပေါက်သည့် အပင်ငယ်တစ်မျိုး) ကြောင့်လို့ Ron က ယူဆနေပါတယ်။
သူ့မှာရှိနေတဲ့ Cloverဟာရှားရှားပါးပါး4လွှာပါဝင်တဲ့အရွက်ဖြစ်လို့ဒီအချက်ကြောင့်သူကကံကောင်းတယ်လို့တွေးကာအဲဒီအရွက်ကလေးကို သွားလေရာဆောင်သွားတဲ့ အလေ့အထကိုတောင် စွဲမြဲနေပြီလို့ Ron က ဆိုပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ Ron ဟာ အသက် 82 နှစ်အတူ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
VPN အသုံးပွုပါက ထောငျဒဏျ(၃)နှဈအထိအပွဈပေး အရေးယူခွငျးခံရမညျ
ထို့ပွငျ အခွားသော အီလကျထရောနဈနှငျ့ ဆိုကျဘာနညျးပညာဆိုငျရာ ကနျ့သတျခကျြမြား၊ အရေးယူဆောငျရှကျမညျ့ ပွဈမှု၊ ပွဈဒဏျမြားအကွောငျးလညျး ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ရေးဆှဲထားသညျကို တှရေ့သညျ။ စဈတပျဒုတိယအကွီးအကဲ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးစိုးဝငျးကို ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ ဦးဆောငျစလေကျြ ဆိုကျဘာလုံခွုံရေးဆိုငျရာ ဗဟိုကျောမတီ ဖှဲ့စညျးရနျလညျး ဥပဒကွေမျးတှငျ ထညျ့သှငျးထားသညျ။
စဈကောငျစီက ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားကို ၎င်းငျးတို့စိတျတိုငျးကြ ကွားဖွတျထောကျလှမျးနိုငျရနျ ‘နိုငျလှတျလုံ’ ဟု အတိုကောကျချေါဝျေါသညျ့ ‘နိုငျငံသားမြား၏ ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာလှတျလပျမှုနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျဆိုငျရာလုံခွုံမှုကို ကာကှယျပေးရေး ဥပဒေ’ ကိုလညျး အာဏာသိမျးပွီး ရကျပိုငျးအတှငျး ပွငျဆငျခဲ့သညျ။
ဆန့်ကျင်သူများကို ပိုမိုနှိပ်ကွပ်နိုင်ရန် အချက်များထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် စစ်ကောင်စီ အပူတပြင်းကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်ကို Myanmar Now က ရရှိထားသည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများအရ သိရသည်။
စစ်ကောင်စီက ၎င်းတို့ အချောသတ်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲထားသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းအပေါ် ယခုလ (ဇန်နဝါရီ) ၁၃ ရက်စွဲဖြင့် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံရာတွင် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက် နောက်ဆုံးထားအကြောင်းပြန်ရန် အပူတပြင်း တောင်းဆိုထားသည်။
စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံရာတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာနများအပြင် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရယူထားသူများနှင့် ဘဏ်များလည်း ပါဝင်သည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်စေရေး မတရားလုပ်ဆောင်နေသည်များကို ကမ္ဘာက သိသွားမည်ကို ကြောက်သဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးယန္တရားများကို တားဆီးပိတ်ပင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ၏ တရား ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဦးက ဆိုသည်။
“မကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်တာဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ မတရားလုပ်ဆောင်မှုတွေကို အမှောင်ချနိုင်ဖို့ အင်တာနက်ကို သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှ သုံးမရအောင်၊ မသုံးရဲအောင် လုပ်တာဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“အမှောင်ကမ္ဘာကြီးထဲကို ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အလင်းထဲ (နည်းပညာခေတ်) ကို သွားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်”
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ အတည်ပြုပြုဌာန်းရန် စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းပြီး ရက်ပိုင်းအကြာ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် ပထမဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးသည်။
ထိုစဉ်က မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုင်စင်ရရှိထားသူများထံ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံသည့်အကြောင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ပျံ့နှံ့လာရာ စစ်ကောင်စီ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ချိုးဖောက်ထားသည့်အတွက် လက်မခံနိုင်ကြောင်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့သော ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်စွဲဖြင့် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ အချက်များအနက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုကို ခြိမ်းခြောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သတင်းတု၊ သတင်းမှားဖြန့်ချိခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ Malware များ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်များ ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
အထက်ပါအချက်များမှာ အပူတပြင်းပြဋ္ဌာန်းရန် စစ်ကောင်စီက စိုင်းပြင်းလာသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။
အခန်း ၁၈ ခန်းပါ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းကို ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အချောသတ်ပြင်ဆင် ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီ၏ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စစ်ကောင်စီက ပြဋ္ဌာန်းမည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များတွင် အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေမည့် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်ဟု ပါရှိသည်။
ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွင် စည်းလုံးမှုနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်ပြားစေသော ရေးသားဖော်ပြမှုမျိုးစုံနှင့် တည်ဆဲဥပဒေကို ဆန့်ကျင်သည့် ရေးသားပြောဆို ဖော်ပြချက်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ထိခိုက်နစ်နာစေရန် ရေးသားပြောဆို ဖော်ပြချက်များကို တားဆီးဖယ်ရှားရမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် VPN နည်းပညာအသုံးပြုခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ Malware များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် Digital ငွေကြေးအသုံးပြုခြင်းများကိုလည်း စစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းလိုသည့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေတွင် တားမြစ်ထားသည်။
အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီက ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်ရေးသားမှုများ ဖြန့်ဖြူးရာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားရာ လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်သည့် Facebook ကြည့်ရှုလိုသူများအနေဖြင့် အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ခြေရာဖျောက်နိုင်သည့် VPN ခေါ် သီးသန့်ကွန်ရက်တစ်မျိုးကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနေရသည်။
ထိုသို့ VPN နည်းပညာအသုံးပြုပါက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ်သိန်း ၅၀ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်ဟု စစ်ကောင်စီက ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်းတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည်။
ထို့ပြင် အခြားသော အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆိုက်ဘာနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်မည့် ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များအကြောင်းလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရေးဆွဲထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စစ်တပ်ဒုတိယအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်စေလျက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်လည်း ဥပဒေကြမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။​
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေမှာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့်အပေါ် စစ်ကောင်စီ၏ နောက်စစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Justice For Myanmar အဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မရတနာမောင်က Myanmar Now ကို ပြောသည်။
“အတည်ပြုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီတရားမဝင်ဥပဒေက လူ့အသက်တွေကို အန္တရာယ်ကျရောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေ တိုးမယ်၊ စောင့်ကြည့်တာတွေ လုပ်မယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုကာ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရန်လည်း Justice For Myanmar အဖွဲ့က တောင်းဆိုသည်။
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါက စစ်ကောင်စီအလိုအရ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသည်ဆိုသော စကားရပ်အားဖြင့် မည်သည့်ရေးသားချက်ကိုမဆို ပိတ်ပင်ရန် သို့မဟုတ် ဖြုတ်ချရန် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများက လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
စစ်ကောင်စီက ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့စိတ်တိုင်းကျ ကြားဖြတ်ထောက်လှမ်းနိုင်ရန် ‘နိုင်လွတ်လုံ’ ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်သည့် ‘နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ’ ကိုလည်း အာဏာသိမ်းပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အမြားပိုငျပစ်စညျးအပျေါ ထားတဲ့စိတျဓာတျမှာ ဂပြနျနဲ့ မွနျမာတို့ ကှာခွားပုံ (ဒီလိုတှကှောလို့ တိုးတကျမှု ကှာတာ)
“ဂပြနျက ဘတျဈကားတှပေျေါမှာ ဆိုဖာ ထိုငျခုံတှကေို ဓါးနဲ့ခှဲထားတာ၊ ဖကျြစီးထားတာမြိုး မရှိပါဘူးတဲ့။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလို ဖကျြစီးလိုကျရငျ ဂပြနျတှရေဲ့ ပစ်စညျး ပကျြစီးသှားတာ၊ ဂပြနျတှရေဲ့ ပိုကျဆံတှေ ဆုံးရှုံးသှားတာပဲလို့ ခံယူကွလို့ပါပဲတဲ့” ။
အမှတျမထငျ ဖတျမိတဲ့ စာလေးတဈကွောငျးပါ။ သွျော… တို့မွနျမာတှေ အတိုငျးပါပဲလားလို့ ပွောရငျ ထရယျကွမလား မသိဘူး။
Correction Pen ကို လူကွီးလူငယျတျောတျောမြားမြား ကောငျးကောငျးကွီး သိကွပါတယျ။ မူရငျးတီထှငျသူက မှငျဖကျြဆေးအဖွဈ တီထှငျခဲ့ပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့
ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈပစ်စညျးတှေ ၊ နရောတှမှော မှငျဖကျြဆေးတှနေဲ့ ပှစိခတျနအေောငျ ရေးထားတာကို စာဖတျသူတှလေညျး မွငျဖူးကွမှာပါ။
တဈခါက ကြှနျတျော ခေါငျးလောငျးအကွီးကွီးတဈခုကို တှတေ့ော့ ၀မျးသာအားရ ခေါငျးလောငျးထိုးမလို့ လုပျတုနျး အထဲမှာ စုံတှဲထိုငျနတောတှလေို့ ဘာလုပျနပေါလိမျ့
ဆိုပွီး ထိုငျကွညျ့နတေော့ ကြှနျတျော့ကို ဘုကွညျ့ကွညျ့ပွီး ထှကျသှားတယျ။
ကြှနျတျောလဲ ဘာမြား ရှိပါလိမျ့ဆိုပွီးခေါငျးလောငျးအောကျ ၀ငျကွညျ့လိုကျတော့ အားပါးပါး စာတှေ စာတှေ မနညျးမနောပါလား။
Correction Pen နဲ့ ရေးထားတာ ဖှေးနတောပဲ။ (၁၀)တနျး စာမှာပါတဲ့ ခေါငျးလောငျးစာ ဆိုတာ ဒါမြိုးနမှောလို့ ထငျစရာရှိတယျ။
“ခငျ့ကို သိပျခဈြတဲ့ မောငျ” တို့
“ကိုကို နဲ့ နှယျ (အမှတျတရ ၄.၅.၂၀၁၁)” တို့ “သူ့ကို လှမျးနတော သူသိပါစေ” တို့ ဖတျရငျးဖတျရငျး တဈပတျလညျပွီး ခေါငျးသာ မူးသှားတယျ စာတှကေ မကုနျဘူး။
နောကျတဈနရောက မန်တလေးနနျးတျောဝငျးထဲက နနျးမွငျ့မြှျောစငျ။ အပျေါရောကျသှားတဲ့အခါ နံရံမှာ အဲ့လိုပဲ ပှစိခတျအောငျ ရေးထားတာ။
Correction pen မပါတဲ့သူက ဓါးနဲ့ ခွဈတယျ။ မကျြခုံးမှေးဆှဲတံ အနကျနဲ့ ရေးတယျ။ (အစက မီးသှေးခဲ ထငျနတော၊ ဒီစာရေးဖို့တော့ မီးသှေးခဲကို ဒီအထိ သယျလာမှာ မဟုတျလောကျဘူး။ ဖွဈခွငျးဖွဈ မကျြခုံးမှေး ဆှဲတံပဲ ဖွဈဖို့ မြားတယျ) ။
နိူငျငံခွားသားတှေ မွငျတဲ့အခါ ပါးစပျ အဟောငျးသားနဲ့ အံ့သွသှားတယျ။ သူတို့ဆီမှာလဲ မှုတျဆေးတှနေဲ့ နံရံမှာ လိုကျရေး၊လိုကျဆှဲတဲ့လူငယျတှေ ရှိပါတယျ။
ယနမှေ့ာတော့ အဲ့ဒါကို အနုပညာတဈရပျအနနေဲ့ ဖျောထုတျပေးလိုကျတဲ့အခါ စညျးကမျးမဲ့ နံရံပျေါမှာ ရေးတာတှေ မဟုတျတော့ပဲ။ ပွပှဲတှေ ပွခနျးတှေ လုပျနိုငျတဲ့အထိ
ကြှနျတျောတို့ ဒီ correction pen လကျရာတှကေ ပနျးခြီတှလေဲ မဟုတျ ၊ မှတျသားစရာလဲ မဟုတျ။ ပွခနျးလညျး လုပျပေးလို့မရ။
အမှတျတရ ဖွဈစခေငျြတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ လုပျတာ ဆိုပမေယျ့ ဒါဟာ မိမိလူမြိုး၊ မိမိနိုငျငံရဲ့ အလှအပကို ဖကျြစီးပဈနမှေနျး မတှေးမိဘူး ထငျပါတယျ။
ကဲ …ဒါဖွငျ့ …ဒါကို ဘယျလို ကာကှယျကွမလဲ။ How to prevent this? ပေါ့။ ရှေးဟောငျးပစ်စညျး (သို့) နရောကို သံဆူးကွိုး ကာရမလား။ ၂၄ နာရီအစောငျ့ ထားရမလား။
CCTV ပဲ တပျပွီး စောငျ့ကွညျ့ အရေးယူရမလား။ တကယျတော့ အဲ့ဒါတှေ တဈခုမှမလိုပါဘူး။ “ဒါတှဟော ငါတို့ တဈမြိုးသားလုံး ပိုငျတယျ။ ငါတို့ မဖကျြစီးသငျ့ဘူး။
ဒါတှကေ ငါတို့နိုငျငံအတှကျ အဖိုးတနျတယျ၊ ငါတို့မဖကျြစီးသငျ့ဘူး။
ဒါတှဟော နောကျလာမယျ့ လူငယျတှအေတှကျ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ကနျြရဈသငျ့တယျ။ ငါတို့ မဖကျြစီးသငျ့ဘူး “ဆိုတဲ့ အသိမြိုးကို လူတိုငျးလူတိုငျးရဲ့ ရငျထဲ
ကြှနျတျောပွောနတောက အငျမတနျ ကွီးကယျြတဲ့ စီမံကိနျးကွီးလဲ မဟုတျပါဘူး။
ဆညျမွောငျး၊ တမံတှေ၊ တံတားတှေ ဆောကျမယျ့ စီမံကိနျးမြိုး၊ နိုငျငံတျော ရှတေ့ကျလှမျးမယျ့ စီမံကိနျးမြိုးတှထေကျ စာရငျ ကြှနျတျောပေးတဲ့ အကွံဥာဏျဟာ အငျမတနျ သေးဖှဲသိမျနုပျတဲ့ အကွံဥာဏျပါ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဒီကနေ့ ဒီ correction pen တှနေဲ့ ရေးတာကို ရပျလိုကျရငျ နောကျ မြိုးဆကျတဈခုကရြငျ အခုလို ညဈပတျနတေဲ့ Correction pen တှေ ပှနတေဲ့ နရောမြိုးတှေ မရှိတော့ပဲ သနျ့ရှငျး သပျရပျတဲ့ MYANMAR (မွနျမာ)
“ဤနရောရောကျငွား အမြား လူ ရှငျ
ခဲတံ ၊ မှငျ ၊ ဆေး မရေးစခေငျြ ၊
တောငျးပနျငွား ရေးထား စတေနာရှငျ ။”
Credit – ဒေါကျတာခနျ့ညားအောငျ
(4th October 2015) မှ
အများပိုင်ပစ္စည်းအပေါ် ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မှာ ဂျပန်နဲ့ မြန်မာတို့ ကွာခြားပုံ (ဒီလိုတွေကွာလို့ တိုးတက်မှု ကွာတာ)
“ဂျပန်က ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ ဆိုဖာ ထိုင်ခုံတွေကို ဓါးနဲ့ခွဲထားတာ၊ ဖျက်စီးထားတာမျိုး မရှိပါဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလို ဖျက်စီးလိုက်ရင် ဂျပန်တွေရဲ့ ပစ္စည်း ပျက်စီးသွားတာ၊ ဂျပန်တွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဆုံးရှုံးသွားတာပဲလို့ ခံယူကြလို့ပါပဲတဲ့” ။
အမှတ်မထင် ဖတ်မိတဲ့ စာလေးတစ်ကြောင်းပါ။ သြော်… တို့မြန်မာတွေ အတိုင်းပါပဲလားလို့ ပြောရင် ထရယ်ကြမလား မသိဘူး။
Correction Pen ကို လူကြီးလူငယ်တော်တော်များများ ကောင်းကောင်းကြီး သိကြပါတယ်။ မူရင်းတီထွင်သူက မှင်ဖျက်ဆေးအဖြစ် တီထွင်ခဲ့ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ပစ္စည်းတွေ ၊ နေရာတွေမှာ မှင်ဖျက်ဆေးတွေနဲ့ ပွစိခတ်နေအောင် ရေးထားတာကို စာဖတ်သူတွေလည်း မြင်ဖူးကြမှာပါ။
တစ်ခါက ကျွန်တော် ခေါင်းလောင်းအကြီးကြီးတစ်ခုကို တွေ့တော့ ၀မ်းသာအားရ ခေါင်းလောင်းထိုးမလို့ လုပ်တုန်း အထဲမှာ စုံတွဲထိုင်နေတာတွေ့လို့ ဘာလုပ်နေပါလိမ့်
ဆိုပြီး ထိုင်ကြည့်နေတော့ ကျွန်တော့်ကို ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး ထွက်သွားတယ်။
ကျွန်တော်လဲ ဘာများ ရှိပါလိမ့်ဆိုပြီးခေါင်းလောင်းအောက် ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ အားပါးပါး စာတွေ စာတွေ မနည်းမနောပါလား။
Correction Pen နဲ့ ရေးထားတာ ဖွေးနေတာပဲ။ (၁၀)တန်း စာမှာပါတဲ့ ခေါင်းလောင်းစာ ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမှာလို့ ထင်စရာရှိတယ်။
“ခင့်ကို သိပ်ချစ်တဲ့ မောင်” တို့
“ကိုကို နဲ့ နွယ် (အမှတ်တရ ၄.၅.၂၀၁၁)” တို့ “သူ့ကို လွမ်းနေတာ သူသိပါစေ” တို့ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း တစ်ပတ်လည်ပြီး ခေါင်းသာ မူးသွားတယ် စာတွေက မကုန်ဘူး။
နောက်တစ်နေရာက မန္တလေးနန်းတော်ဝင်းထဲက နန်းမြင့်မျှော်စင်။ အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါ နံရံမှာ အဲ့လိုပဲ ပွစိခတ်အောင် ရေးထားတာ။
Correction pen မပါတဲ့သူက ဓါးနဲ့ ခြစ်တယ်။ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတံ အနက်နဲ့ ရေးတယ်။ (အစက မီးသွေးခဲ ထင်နေတာ၊ ဒီစာရေးဖို့တော့ မီးသွေးခဲကို ဒီအထိ သယ်လာမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် မျက်ခုံးမွှေး ဆွဲတံပဲ ဖြစ်ဖို့ များတယ်) ။
နိူင်ငံခြားသားတွေ မြင်တဲ့အခါ ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ အံ့သြသွားတယ်။ သူတို့ဆီမှာလဲ မှုတ်ဆေးတွေနဲ့ နံရံမှာ လိုက်ရေး၊လိုက်ဆွဲတဲ့လူငယ်တွေ ရှိပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ အဲ့ဒါကို အနုပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ စည်းကမ်းမဲ့ နံရံပေါ်မှာ ရေးတာတွေ မဟုတ်တော့ပဲ။ ပြပွဲတွေ ပြခန်းတွေ လုပ်နိုင်တဲ့အထိ
ကျွန်တော်တို့ ဒီ correction pen လက်ရာတွေက ပန်းချီတွေလဲ မဟုတ် ၊ မှတ်သားစရာလဲ မဟုတ်။ ပြခန်းလည်း လုပ်ပေးလို့မရ။
အမှတ်တရ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာ ဆိုပေမယ့် ဒါဟာ မိမိလူမျိုး၊ မိမိနိုင်ငံရဲ့ အလှအပကို ဖျက်စီးပစ်နေမှန်း မတွေးမိဘူး ထင်ပါတယ်။
ကဲ …ဒါဖြင့် …ဒါကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ။ How to prevent this? ပေါ့။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း (သို့) နေရာကို သံဆူးကြိုး ကာရမလား။ ၂၄ နာရီအစောင့် ထားရမလား။
CCTV ပဲ တပ်ပြီး စောင့်ကြည့် အရေးယူရမလား။ တကယ်တော့ အဲ့ဒါတွေ တစ်ခုမှမလိုပါဘူး။ “ဒါတွေဟာ ငါတို့ တစ်မျိုးသားလုံး ပိုင်တယ်။ ငါတို့ မဖျက်စီးသင့်ဘူး။
ဒါတွေက ငါတို့နိုင်ငံအတွက် အဖိုးတန်တယ်၊ ငါတို့မဖျက်စီးသင့်ဘူး။
ဒါတွေဟာ နောက်လာမယ့် လူငယ်တွေအတွက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျန်ရစ်သင့်တယ်။ ငါတို့ မဖျက်စီးသင့်ဘူး “ဆိုတဲ့ အသိမျိုးကို လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲ
ကျွန်တော်ပြောနေတာက အင်မတန် ကြီးကျယ်တဲ့ စီမံကိန်းကြီးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆည်မြောင်း၊ တမံတွေ၊ တံတားတွေ ဆောက်မယ့် စီမံကိန်းမျိုး၊ နိုင်ငံတော် ရှေ့တက်လှမ်းမယ့် စီမံကိန်းမျိုးတွေထက် စာရင် ကျွန်တော်ပေးတဲ့ အကြံဥာဏ်ဟာ အင်မတန် သေးဖွဲသိမ်နုပ်တဲ့ အကြံဥာဏ်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ ဒီ correction pen တွေနဲ့ ရေးတာကို ရပ်လိုက်ရင် နောက် မျိုးဆက်တစ်ခုကျရင် အခုလို ညစ်ပတ်နေတဲ့ Correction pen တွေ ပွနေတဲ့ နေရာမျိုးတွေ မရှိတော့ပဲ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ MYANMAR (မြန်မာ)
“ဤနေရာရောက်ငြား အများ လူ ရှင်
ခဲတံ ၊ မှင် ၊ ဆေး မရေးစေချင် ၊
တောင်းပန်ငြား ရေးထား စေတနာရှင် ။”
Credit – ဒေါက်တာခန့်ညားအောင်
(4th October 2015) မှ
(၅) နှဈအရှယျသားလေးကို KTV ချေါသှားပွီး ကောငျမလေးနှဈယောကျချေါပေးထားသညျ့ ဖခငျ
ကလေးငယျသညျ သူ၏ ဖွူစငျသော စိတျထားလေးနှငျ့ သနျ့ရှငျးစငျကွယျသောပြျောရှငျဖှယျဘ
ဝလေးဟာ အဖွူထညျအဖွဈမှ အရောငျပွောငျးလဲသှားနိုငျခဲ့ပသေညျ။ငယျစဉျခါအရှယျ
သညျကား ဘဝတဈခုလုံး၏ အခွခေံဖွဈသညျ့အတှကျအရေးကွီးဆုံးသောအသကျအရှယျ
အရှယျပငျဖွဈပသေညျ…ထို့ကွောငျ့ပငျ မိဘမြားဟာ သားသမီးလေးတှကေို ကြောငျးသို့ပို့ဆောငျ
ကာအသိပညာအတတျပညာမြားကို သငျကွားစခွေငျးဖွဈပါတယျ…သို့သျောလညျး တရုတျနိုငျငံမှ
ဖခငျတဈဦးဟာ အသကျ ၅ နှဈအရှယျသာ ရှိသေးသော သားငယျလေးကိုကတေီဗှီသို့ချေါ
ဆောငျသှားပွီးပြျောပါးစခေဲ့ပါတယျ…ထို့ကလေးငယျ၏ ပုံရိပျမြားဟာ လိုငျးပျေါတှငျ အလှနျပြံနှံ
လာခဲ့ပွီးလူအမြား၏ အာရုံစိုကျခွငျးကို ခံလာရပါတယျ
ကလေးငယျကို ချေါဆောငျသှားခဲ့သော ဖခငျကို လူတိုငျးက အံ့အားသငျ့နခေဲ့ကွပွီးမိဘတဈဦး
အနဖွေငျ့ မညျသို့မှ မလုပျသငျ့သညျ့လုပျရပျဟူ၍လညျး ဝဖေနျနကွေပါတယျ
ကလေးငယ်သည် သူ၏ ဖြူစင်သော စိတ်ထားလေးနှင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောပျော်ရွင်ဖွယ်ဘ
ဝလေးဟာ အဖြူထည်အဖြစ်မှ အရောင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပေသည်။ငယ်စဉ်ခါအရွယ်
သည်ကား ဘဝတစ်ခုလုံး၏ အခြေခံဖြစ်သည့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအသက်အရွယ်
အရွယ်ပင်ဖြစ်ပေသည်…ထို့ကြောင့်ပင် မိဘများဟာ သားသမီးလေးတွေကို ကျောင်းသို့ပို့ဆောင်
ကာအသိပညာအတတ်ပညာများကို သင်ကြားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်…သို့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ
ဖခင်တစ်ဦးဟာ အသက် ၅ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသော သားငယ်လေးကိုကေတီဗွီသို့ခေါ်
ဆောင်သွားပြီးပျော်ပါးစေခဲ့ပါတယ်…ထို့ကလေးငယ်၏ ပုံရိပ်များဟာ လိုင်းပေါ်တွင် အလွန်ပျံနှံ
လာခဲ့ပြီးလူအများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ခံလာရပါတယ်
ကလေးငယ်ကို ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သော ဖခင်ကို လူတိုင်းက အံ့အားသင့်နေခဲ့ကြပြီးမိဘတစ်ဦး
အနေဖြင့် မည်သို့မှ မလုပ်သင့်သည့်လုပ်ရပ်ဟူ၍လည်း ဝေဖန်နေကြပါတယ်